Ime ka a mata na Ndi-Aka-ebe nile
Okwu nile nke Mọmọn
Lee Mbudata niile
Akwụkwọ Niile (PDF)
Nhazi Okwu niile
Ákára ihu-akwụkwọ nke Akwụkwọ nke Mọmọn
Ya mere, ọ bụ na mkpirisi akụkọ-ndekọta banyere ndị Nifaị, na kwa ndị Leman—E degaara ndị Leman, ndị bụ ndị fọdụrụ bụ nke ụlọ nke Israel; na kwa ndị Juu na Jentaịlụ—E dere n’ụdị iwu-nsọ, na kwa site n’ike nke mụọ ibu-amụma na nke nkpughe—E dere ma rachie, ma zookwara ya Onye-nwe, ka a ghara imebi ha—Ka ha pụtakwa site n’onyinye na ike nke Chineke, maka nsụgharị-okwu dị n’ime ya—A rachịrị site n’aka nke Moronaị, ma zookwara ya Onye-nwe, ka ha pụta kwa mgbe oge ruru site n’aka ndị Jentaịlụ—Nsụgharị-okwu dị n’ime ya site n’onyinye nke Chineke.
Ime ka a Mata
Akwụkwọ nke Mọmọn bụ ukwu akwụkwọ-nsọ nke a ga-atụnyere Bible. Ọ bụ akụkọ-ndekọta maka mmekọrịta Chineke na ndị nile bi na Amerika mgbe ochie ma ihe dị n’ime ya bụ uju nke ozi-ọma mgbe nile na-adigide.
Nke-nke nkọwa gbasara Akwụkwọ nke Mọmọn
Akwụkwọ nke Mọmọn bụ akụkọ-ndekọta dị nsọ banyere ndị mgbe ọchịe bi n’Amerika, ma a kanyere ya n’elu ọtụtụ mbara igwe. Ụdị epekele igwe anọ ka e kwuru maka ha n’ime akwụkwọ ahụ n’onwe ya:
Nkọwa ọmụma-atụ nile
1 Niphaị 1
Nifaị wee malite ide akụkọ-ndekọta banyere ndị ya—Lihaị wee hụ ọ́hụ̀ ogidi ọkụ ma gụọ kwa n’akwụkwọ nke amụma—O wee too Chineke, gbaa ama gbasara ọbịbịa nke Mesaịa, wee buo amụma mbibi nke Jerusalem—Ndị Juu wee na-esogbu ya. Ihe dịka n’afọ 600 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 2
Lihaị wee kpọrọ ezi na ụlọ ya baa n’ime ọzara n’akụkụ Oke Osimiri Uhie—Ha wee hapụ arịa ha—Lihaị wee chụọ aja nye Onye-nwe ma kuziekwara ụmụ ya ndị nwoke idebe iwu-nsọ nile—Leman na Lemuel tamuru megide nna ha—Nifaị rubere isi na-ekpekwa ekpere n’okwukwe; Onye-nwe gwara ya okwu, e wee họpụta ya ka ọ chịwa ụmụnne ya. Ihe dịka n’afọ 600 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 3
Ụmụ ndịkom Lihaị wee laghachị Jerusalem iweta epekele bras—Leban wee jụ inyepụ epekele ndị ahụ—Nifaị kwalitere ma gbaa kwa ụmụnne ya ume—Leban wee zuru akụ na ụba ha chọọkwa igbu ha—Leman na Lemuel tiri Nifaị na Sam ihe, mụọ ozi wee baara ha mba. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 4
Nifaị wee gbuo Leban dịka Onye-nwe nyere ya n’iwu-nsọ, o wee nwetakwa epekele bras ahụ site n’ụzọ aghụghọ—Zorọm wee họrọ isonye ezi na ụlọ Lihaị n’ime ọzara ahụ. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 5
Saraịa wee kpesa mkpesa megide Lihaị—Ha abụọ wee n̄ụrịa ọn̄ụ maka nlọta nke ụmụ ha—Ha wee chụọ aja—Ihe dị n’epekele bras ahụ bụ ihe odide nile nke Moses na ndị-amụma—Epekele ndị ahụ chọpụtara na Lihaị si n’agbụrụ nke Josef—Lihaị wee buo amụma gbasara mkpụrụ-afọ nke ya na otu aga-esị chekwa epekele nile ahụ. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 6
Nifaị wee dee maka ihe nile nke Chineke—Ebum-n’obi Nifaị bụ ime ka ndị mmadụ kwere ma bịakwutekwa Chineke nke Abraham ka a zọpụta ha. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 7
Ụmụ Lihaị ndị nwoke wee laghachị Jerusalem ma wee kpọọ Ịshmel na ezi na ụlọ ya oku ka ha soro ha na njem ha—Leman na ndị ọzọ wee nupu isi—Nifaị wee gbaa ụmụnne ya ume ka ha nwe okwukwe n’ime Onye-nwe—Ha kere ya agbụ wee tụọ atụmatụ mbibi ya—A zọpụtara ya site n’ike nke okwukwe—Ụmụnne ya wee rịọ mgbaghara—Lihaị na ndị otu ya chụrụ aja na onyinye nsure ọkụ. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 8
Lihaị hụrụ ọ́hụ̀ nke osisi nke ndụ—O wee rachaa mkpụrụ ya wee chọọkwa ka ndị ezi na ụlọ ya mee otu aka ahụ—Ọ hụrụ okporo igwe, ụzọ di wara-wara ma dị kwa mkpafa, na igirigị ọchịchịrị nke kpuchiri ndị mmadụ—Saraịa, Nifaị, na Sam wee rachaa mkpụrụ-osisi ahụ, ma Leman na Lemuel jụrụ ajụ. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 9
Nifaị wee dee ụzọ akụkọ-ndekọta abụọ—Nke ọbụla n’ime ha ka a na-akpọ epekele nke Nifaị—Ndị nnukwu epekele ka e dere akụkọ ihe nke ụwa; ndị ntakịrị bụ ebe e dere akụkọ ihe ndị dị nsọ. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 10
Lihaị wee buo-amụma na ndị Babịlọn ga-adọkpụrụ ndị Juu n’agha—O wee kwuo maka ọbibịa n’etiti ndị Juu nke Mesaịa, Onye-nzọpụta, Onye-mgbapụta—Lihaị wee kwuo kwa maka ọbịbịa nke otu onye ga-eme Nwa-atụrụ Chineke baptism—Lihaị wee kwuo maka ọnwụ na mbilite n’ọnwụ nke Mesaịa—O jiri mkposasị na mkpọkọta nke ụmụ Israel tụnyere osisi olive—Nifaị wee kwuo maka Ọkpara nke Chineke, onyinye nke Mụọ Nsọ, ya na mkpa ọ dị ime ezi-omume. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 11
Nifaị wee hụ Mụọ nke Onye-nwe ma e gosirị ya n’ọ́hụ̀ osisi nke ndụ́—O wee hụ nne nke Ọkpara Chineke ma mata ihe gbasara iwèdata onwe ala nke Chineke—Ọ wee hụ baptism, ije-ozi, na mkpọgide n’obe nke Nwa-atụrụ Chineke—O wee hụkwa ọkpụkpọ na ije-ozi nke Ndị-ozi Iri na Abụọ nke Nwa-atụrụ ahụ. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 12
Nifaị wee hụ n’ọ́hụ̀ ala e kwere na nkwa; ezi-omume ahụ, ajọọ-omume, na ọdịda nke ndị bi n’ime ya; ọbịbịa nke Nwa-atụrụ nke Chineke n’etiti ha; otu ndị Na-eso Ụzọ Iri na Abụọ na Ndị-ozi Iri na Abụọ ga-esị kpee Israel ikpe; na ọnọdụ enweghị mmasị na iru-inyi nke ndị na-ala azụ site n’ekweghị ekwe. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 13
Nifaị wee hụ n’ọ́hụ̀ nzukọ nke ekwensu ka ehiwere n’etiti ndị Jentaịlụ, nchọpụta na iwere ọchịchị ala Amerika, ofufu nke ọtụtụ akụkọ dị mfe nghọta na oke mkpa nʼime Bible, ihe sotere ọnọdụ nke ndị Jentaịlụ ịgọnarị okwukwe, mwetaghachị nke ozi-ọma ahụ, ọbịbịa nke akwụkwọ-nsọ nke ụbọchị ikpe-azụ, na mwulite elu nke Zaịọn. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 14
Mụọ-ozi wee gwa Nifaị maka ngọzi nile na ọbụbụ ọnụ nile ga-adakwasị ndị Jentaịlụ—E nwere nanị nzukọ abụọ: Nzukọ-nsọ nke Nwa-atụrụ Chineke na nzukọ nke ekwensu—Ndị-nsọ nke Chineke na mba nile a na-esogbu ha site n’aka nnukwu nzukọ ahụ rụrụ arụ—Onye-ozi Jọn ga-ede gbasara ọgwụgwụ ụwa. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 15
Mkpụrụ-afọ nke Lihaị ga-enweta ozi-ọma ahụ site n’aka ndị Jentaịlụ n’ụbọchị ikpeazụ ndị a—Mkpọkọta nke Israel ka e jiri tụnyere osisi olive nke a ga-anyakodo kwa ngalaba o jiri pụta ụwa ọzọ—Nifaị wee kọwa ọ́hụ̀ ahụ gbasara osisi nke ndụ ma kwuo okwu maka ikpe zịrị ezi nke Chineke n’ikewapụ ndị ajọọ omume site na ndị ezi-omume. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 16
Ndị ajọọ-mmadụ weere ezi-okwu ahụ ka ihe siri ike—Ụmụ nwoke Lihaị wee lụọ ụmụ-ada Ịshmel—Liahona ahụ na-eduzi ha ụzọ n’ime ọzara—Ozi nile si n’ebe Onye-nwe nọ ka e dere n’elu Liahona site n’oge ruo n’oge—Ịshmel wee nwụọ; ezi na ụlọ ya na-atamu n’ihi ọtụtụ mkpagbu. Ihe dịka n’afọ 600 ruo 592 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 17
Nifaị ka e nyere iwu ka o wuo ụgbọ mmiri—Ụmụnne ya guzoro megide ya—O wee rịọ ha site n’ịkọgharịrị ha akụkọ mmekọrịta nke Chineke na ụmụ Israel—E mejupụtara Nifaị n’ike nke Chineke—E kweghị ka ụmụnne ya metụ ya aka, ka ha ghara ịkpọnwụ dịka ahịhịa kpọrọ nkụ. Ihe dịka n’afọ 592 ruo 591 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 18
E wuchawo ụgbọ mmiri ahụ—E kwutere okwu gbasara ọmụmụ nke Jekob na Josef—Ndị otu ahụ wee malite njem ịga n’ala nke e kwere na nkwa—Ụmụ nke Ịshmel ndị nwoke na ndị nwunye ha wee sonye na nkwutọ na Inupu isi—E kere Nifaị agbụ, ma ụgbọ mmiri ahụ ka ebughachịrị azụ site n’ebili mmirị dị egwụ—A tọpụrụ Nifaị agbụ, ma site n’ekpere ya ebili mmiri ahụ kwụsịrị—Ndị ahụ wee garuo n’ala nke e kwere na nkwa. Ihe dịka n’afọ 591 ruo 589 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 19
Nifaị wee mee epekele nke ntụ igwe ma dee akụkọ nke ndị ya—Chineke nke Israel ga-abịa na narị afọ isii site n’oge Lihaị jiri hapụ Jerusalem—Nifaị wee kọọ maka ahụhụ nile na mkpọgide n’obe Ya—Ndị Juu ka a ga-eleda anya ma kposasịa ruo n’ụbọchị ikpeazụ ndị a, mgbe ha ga-alaghachịkwute Onye-nwe. Ihe dịka n’afọ 588 ruo 570 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 20
Onye-nwe wee kpughee ebum-n’obi ya nile nye Israel—A họpụtawo Israel n’ime oke ọkụ nke mkpagbu ma ha ga-agapụ site na Babịlọn—Tulee Aịsaịa 48. Ihe dịka n’afọ 588 ruo 570 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 21
Mesaịa ahụ ga-abụ ìhè nye ndị Jentaịlụ na ọ ga-eme ka ndị mkpọrọ nwere onwe ha—Israel ka a ga-eji ike chịkọta n’ụbọchị ikpe-azụ nile—Ndị eze ga-abụ ndị nna na-azụ ha—Tulee Aịsaịa 49. Ihe dịka n’afọ 588 ruo 570 tutu amụọ Kraịst.
1 Niphaị 22
Israel ka a ga-ekposasị n’elu iru nile nke ụwa—Ndị Jentaịlụ ga-azụ ma were ozi ọma nyejuo Israel afọ n’ụbọchị ikpe-azụ nile—Israel ka a ga-akpọkọta ma zọpụta ha, ma ndị ajọọ-omume ga-agba ọkụ dịka ahihịa kpọrọ nkụ—Ala-eze nke ekwensu ka a ga-ebibi, ma Setan ka a ga-eke agbụ. Ihe dịka n’afọ 588 ruo 570 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 1
Lihaị wee buo amụma gbasara ala nke ntọhapụ—Mkpụrụ-afọ ya ka a ga-ekposasị ma tie ihe ma ọ bụrụ na ha jụ ịnabata Onye-Nsọ nke Israel—O wee gbaa ụmụ ya ume ka ha yiri ngwa agha nke ezi-omume. Ihe dịka n’afọ 588 ruo 570 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 2
Mgbapụta na-abịa site n’ Mesaịa ahụ dị Nsọ—Inwere-onwe nke nhọrọ (ohere ịhọrọ) dị mkpa na ndụ na ịga n’iru—Adam dara ka mmadụ wee dị—Mmadụ nwere ohere ịhọrọ ntọhapụ na ndụ ebighi-ebi. Ihe dịka n’afọ 588 ruo 570 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 3
Josef n’Ijipt hụrụ ndị Nifaị n’óhụ̀—O buru amụma maka Joseph Smith, onye ọhụ-ụzọ nke oge ikpeazụ; maka Moses, onye ga-anapụta Israel; na maka mbịarute Akwụkwọ nke Mọmọn. Ihe dịka n’afọ 588 ruo 570 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 4
Lihaị wee nye ndụmọdụ ma wee gọzie ụmụ na ụmụụmụ ya—O wee nwụọ ma e lie ya—Nifaị wee nwe otuto n’ịdị mma nke Chineke—Nifaị wee tinye ntụkwasị-obi ya n’Onye-nwe ruo mgbe nile. Ihe dịka n’afọ 588 ruo 570 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 5
Ndị Nifaị wee wezuga onwe ha site n’ebe ndị Leman nọ, debe iwu nke Moses, ma wuo temple—N’ihi ekweghị-ekwe ha, e bepụrụ ndị Leman site n’iru nke Onye-nwe, ma a bụrụ ha ọnụ ma bụrụ ọpịpịa ụtarị nye ndị Nifaị. Ihe dịka n’afọ 588 ruo 559 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 6
Jekọb wee kọgharịa akụkọ ndị Juu: Ndọkpụ n’agha ahụ baa Babịlọn na nlọta ha; ije-ozi na mkpọgide n’obe nke Onye-Nsọ nke Israel; inye aka e nwetara site n’aka ndị Jentaịlụ; na mkpọtaghachi ndị Juu nke oge ikpe-azụ mgbe ha ga-ekwenye na Mesaịa ahụ. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 7
Aịsaịa wee kwuo okwu dịka Mesaịa—Mesaịa ahụ ga-enwe ire nke onye nwere mmụta—Ọ ga-agbanyere ndị mmekpa-arụ azụ ya—Ọ gaghị enwe mgbagwọjụ-anya—Tulee Aịsaịa 50. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 8
N’ụbọchị ikpe-azụ nile, Onye-nwe ga-akasi Zaịọn obi ma chịkọta Israel—Ndị agbapụtara ga-abịa na Zaịọn n’etiti nnukwu ọn̄ụ—Tulee Aịsaịa 51; 52:1–2. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 9
Ndị Juu nile ka a ga-achịkọta n’ala ha nile nke e kwere na nkwa—Aja mgbaghara mmehie ahụ na-agbapụta mmadụ site n’Ọdịda ahụ—Arụ nile nke ndị nwụrụ-anwụ ga-apụta site n’ili, na mụọ ha nile site n’ala mụọ na site na paradaịs—A ga-ekpe ha ikpe—Aja mgbaghara mmehie ahụ na-azọpụta site n’ọnwụ, ala mụọ, ekwensu ahụ, na ahụhụ agwụgh-agwụ—Ndị ezi-omume ka a ga-azọpụta n’ala-eze Chineke—Ntaram-ahụhụ nke mmehie nile ka edoziworo—Onye-Nsọ nke Israel bụ onye-nche ọnụ ụzọ ama ahụ. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 10
Ndị Juu ga-akpọgide Chineke ha n’obe—A ga-ekposasị ha ruo mgbe ha ga amalite ikwere na ya—Amerika ga-abụ ala ntọhapụ ebe n’adịghị eze ga-achị ya—Ka unu na Chineke mee udo ma rite nzọpụta site n’amara ya. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 11
Jekob hụrụ Onye-mgbapụta ya—Iwu nke Moses na-egosị ezigbo-ụdị nke Kraịst ma gosipụta na ọ ga-abịa. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 12
Aịsaịa wee hụ temple nke ụbọchị-ikpeazụ, mkpọkọta nke Israel, na ikpe nke oge Jisus ga-abịa n’ụwa chịa otu puku afọ na udo—Ndị mpako na ajọọ-omume ka a ga-eweda ala n’Ọbịbịa nke Ugboro Abụọ—Tulee Aịsaịa 2. Ihe dika n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 13
Juda na Jerusalem ka aga-ata ahụhụ n’ihi erubeghị-isi ha—Onye-nwe na-arịọ maka ma na-ekpe ndị ya ikpe—Ụmụada nke Zaịọn ka a bụrụ ọnụ ma taa ha ahụhụ n’ihi ịdabere n’ihe nke ụwa—Tulee Aịsaịa 3. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 14
Zaịọn na ụmụada ya ka a ga-agbapụta ma sachaa ha n’ụbọchị ndị ahụ Jisus ga-achị otu puku afọ—Tulee Aịsaịa 4. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 15
Ubi vine Onye-nwe ahụ (Israel) ga-atọgbọrọ n’efu, ma ndị ya ka a ga-ekposasị—Ọtụtụ ahụhụ ga-abịakwasị ha n’ime ngọnarị-okwukwe na ọnọdụ mkposasị ha—Onye-nwe ga-ewelite ọkọlọtọ ma chịkọta Israel—Tulee Aịsaịa 5. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 16
Aịsaịa wee hụ Onye-nwe—Mmehie nile nke Aịsaịa ka agbagharaworo—A kpọrọ ya ka o buo amụma—O buru amụma maka ọjụjụ nke ndị Juu jụrụ ozizi nile nke Kraịst—Ụfọdụ ga-alaghachị. Tulee Aịsaịa 6. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 17
Ifrem na Sịria busoro Juda agha—Kraịst ka a ga amụta site n’afọ nwa-agbọghọ-na-amaghị-nwoke—Tulee Aịsaịa 7. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 18
Kraịst ga-adị ka otu okwute nke nkpọbi ụkwụ na nke otu nkume nkpasu-iwe—Chọọ Onye-nwe, ọbụghị ndị amụsu n’enyo-enyo—Lekwasị iwu ahụ na ama ahụ anya maka ndụzi.—Tulee Aịsaịa 8. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 19
Aịsaịa wee kwuo dịka Mesaịa—Ndị mmadụ nọ n’ọchịchịrị ga-ahụ oke ìhè—A mụwo otu nwa nye anyị—Ọ ga-abụ Ọkpara-Eze nke Udo ma ọ ga-achị n’oche-eze Devid—Tulee Aịsaịa 9. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 20
Mbibi nke Asịria ahụ bụ ụdị mbibi nke ndị ajọọ-mmadụ n’oge Ọbịbịa nke Ugboro Abụọ—Mmadụ ole na ole ga-afọdụ mgbe Onye-nwe bịaworo ọzọ—Ndị nke Jekọb fọdụrụ ga-alaghachị n’ụbọchị ahụ—Tulee Aịsaịa 10. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 21
Ogwe-osisi nke Jesi ahụ (Kraịst) ga-ekpe ikpe n’ezi-omume—Ọmụma nke Chineke ga-ekpuchi ụwa n’Oge Jisus ga-achị ụwa otu puku afọ—Onye-nwe ga-ewelite ọkọlọtọ ma chịkọta Israel—Tulee Aịsaịa 11. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 22
N’ụbọchị ọchịchị otu puku afọ n’elu ụwa mmadụ nile ga-eto Onye-nwe—Ọ ga-ebi n’etiti ha—Tulee Aịsaịa 12. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 23
Mbibi nke Babịlọn ahụ bụ otu ụdị nke mbibi ga-adi n’Ọbịbịa nke Ugboro Abụọ ahụ—Ọ ga-abụ ụbọchị nke oke iwe na ibọ-ọbọ—Babịlọn (ụwa) ga-ada ruo mgbe nile—Tulee Aịsaịa 13. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 24
Israel ka a ga-akpọkọta ma ha ga-enwe ọn̄ụ n’oge ezumike nke oge ọchịchị otu puku afọ n’ụwa—Lusịfa ka achụpụrụ site n’elu-igwe n’ihi nnupụ-isi—Israel ga-emeri Babịlọn (ụwa).—Tulee Aịsaịa 14. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 25
Nifaị wee na-an̄ụrị-ọn̄ụ n’ime ka ihe doo anya—Amụma nile Aịsaịa buru ka a ga-aghọta n’ụbọchị ndị-ikpe-azụ—Ndị Juu ga-alaghachị site na Babịlọn, kpọgide Mesaịa ahụ n’obe, ma bụrụ ndị aga ekposasị na ndị a ga-eti otiti ihe—A ga-akpọtaghachị ha mgbe ha kwere na Mesaịa ahụ—Ọ ga-ebu ụzọ bịa mgbe o meworo narị afọ isii ka Lihaị hapụrụ Jerualem—Ndị Nifaị na-edebe iwu nke Moses ma kwere na Kraịst, onye bụ Onye-Nsọ nke Israel. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 26
Kraịst ga-ekwusara ndị Nifaị ozi-ọma—Nifaị wee hụ mbibi nke ndị ya n’oge—Ha ga-ekwu okwu site n’uzuzu—Ndị Jentaịlụ ga-ewulite ọtụtụ nzukọ ụgha na ntụgwa nzuzo nile—Onye-nwe wee gbochịe ndị mmadụ ime nchụ-aja aghụghọ. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 27
Ọchịchịrị na ngọnarị-okwukwe ga-ekpuchi ụwa n’ụbọchị ịkpe-azụ nile—Akwụkwọ nke Mọmọn ga-apụta—Ndị aka-ebe mmadụ atọ ga-agba-ama maka akwụkwọ ahụ—Nwoke nwere mmụta ga-asị na ọ gaghị-enwe-ike ịgụ akwụkwọ ahụ arachiri-arachi—Onye-nwe ga-arụ ọrụ dị ịtụ-n’anya na ihe iju anya—Tulee Aịsaịa 29. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 28
Ọtụtụ nzukọ ụgha ka a ga ewulite n’ụbọchị ikpe azụ nile—Ha ga akụzi ozizi ụgha, na-abaghị-uru, na ozizi iberibe nile—Ngọnarị okwukwe ga-aba ụba n’ihi ndị nkuzi ụgha—Ekwensu ga akpali iwe ọkụ n’ime obi nke mmadụ—Ọ ga akụzi ụdi nkuzi okwukwe ụgha nile di iche iche. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 29
Ọtụtụ ndị Jentaịlụ ga ajụ Akwụkwọ nke Mọmọn ahụ—Ha ga-asị, Anyị achọkwaghị Bible ọzọ—Onye-nwe na-agwa ọtụtụ mba okwu—Ọ ga-ekpe ụwa ikpe site n’akwụkwọ nile ndị a a ga-edepụta. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 30
Ndị Jentaịlụ e mere ka ha chegharịa ka a ga-agụnye n’ime ndị ọgbụgba-ndụ—Ọtụtụ ndị Leman na ndị Juu ga-ekwenye n’okwu ahụ ma wee dị nma ile anya—Israel ka a ga-akpọtaghachi ma e bibie ndị ajọọ mmadu. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 31
Nifaị wee kwuo ihe mere e jiri mee Kraịst baptism—Ndị mmadụ ga-esorịrị Kraịst, mee baptism, nata Mụọ Nsọ, ma nọgide ruo ọgwụgwụ ka ha nwe nzọpụta—Nchegharị na baptism bụ ọnụ ụzọ n’edụba n’ụzọ ahụ di wara-wara ma dị kwa mkpafa—Ndụ ebighi-ebi na-abịara ndị na-edebe iwu-nsọ nile mgbe emesịrị baptism. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 32
Ndị mụọ-ozi na-ekwu okwu site n’ike nke Mụọ Nsọ—Ndị mmadụ ga-ekperịrị ekpere ma nweta mmụta nke onwe ha site na Mụọ Nsọ. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
2 Niphaị 33
Okwu nile nke Nifaị bụ ezi-okwu—Ha na-agba-ama maka Kraịst—Ndị nile kwere na Kraịst ga-ekwere n’okwu nile nke Nifaị nke ga-eguzo dịka ihe aka-ebe n’iru oche-ikpe. Ihe dịka n’afọ 559 ruo 545 tutu amụọ Kraịst.
Jekọb na Josef wee chọọ ịtụgharị obi ndị mmadụ ịkwere na Kraịst na-idebe iwu-nsọ ya nile—Nifaị wee nwụọ—Ajọọ-omume wee jupụta n’etiti ndị Nifaị. Ihe dịka n’afọ 544 ruo 421 tutu amụọ Kraịst.
Jekọb kwutọrọ ịhụ akụ na ụba n’anya, mpako, na adịghị ọcha—Ndị mmadụ nwere ike ịchọ akụ na ụba iji nyere ndị mmadụ ibe ha aka—Jekọb megidere omume nke ịlụ ọtụtụ ndịnyom na-enweghị ikike—Onye-nwe na-enwe mmasị n’ịdị ọcha nke ụmụ nwanyị. Ihe dịka n’afọ 544 ruo 421 tutu amụọ Kraịst.
Ndị dị ọcha n’obi na-anata okwu mmasị nke Chineke—Ezi-omume nke ndị Leman wee karịa nke ndị Nifaị—Jekọb wee baa mba megide ịkwa-iko, agụụ ịkwa iko, na mmehie nile. Ihe dịka n’afọ 544 ruo 421 tutu amụọ Kraịst.
Ndị-amụma nile fere Nna ahụ ofufe n’aha Kraịst—Onyinye Abraham nyere Aịsak bụ n’ụdị pụtara ìhè nke Chineke na Onye Ọ mụrụ nanị ya—Ndị mmadụ kwesịrị ime udo ha na Chineke site n’Aja mgbaghara mmehie ahụ—Ndị Juu ga ajụ okwute ntọ-ala ahụ. Ihe dịka n’afọ 544 ruo 421 tutu amụọ Kraịst.
Jekọb wee n̄omie Zinọs n’ihe gbasara ogologo akụkọ ịtụ ilu nke osisi-olive ụlọ na nke ọhịa—Ha bụ ihe yiri Israel na ndị Jentaịlụ—Mkposasị na mkpọkọta nke Israel bụ ihe ngosi maka ọ dị n’iru—E kwuru n’ụdị aghụghọ gbasara ndị Nifaị na ndị Leman na ụlọ nke Israel nile—Ndị Jentaịlụ ka a ga-anyakụdo n’ime Israel—E mesịa ubi-vine ahụ ka a ga-akpọ ọkụ. Ihe dịka n’afọ 544 ruo 421 tutu amụọ Kraịst.
Onye-nwe ga-enweta kwa Israel ọzọ n’ụbọchị ikpe-azụ ndị a—A ga-erepịa ụwa site n’ọkụ—Ndị mmadụ ga esorịrị Kraịst ịgbanarị ọdọ ọkụ na nkume ọkụ ahụ. Ihe dịka n’afọ 544 ruo 421 tutu amụọ Kraịst.
Sherọm wee gọnarị Kraịst, wee nwe ndọrọ-ndọrọ ya na Jekọb, wee rịo ihe iriba-ama ma nwee ihe otiti site n’aka Chineke—Ndị-amụma nile ekwuwo maka Kraịst na aja mgbaghara mmehie ya—Ndị Nifaị wee bichaa ụbọchị ha nile dịka ndị mkpagharị, a mụrụ ha n’ime mkpagbu ma akpọrọ ha asị site n’aka ndị Leman. Ihe dịka n’afọ 544 ruo 421 tutu amụọ Kraịst.
Inọs wee kpesie ekpere ike ma rite uru nsachapụ nke mmehie ya nile—olu nke Onye-nwe wee bata n’ime obi ya, na-ekwe nkwa nzọpụta maka ndị Leman—Ndị Nifaị chọrọ inwetaghachị ndị Leman—Inọs wee nwee ọn̄ụ n’ime Onye-mgbapụta ya. Ihe dịka n’afọ 420 tutu amụọ Kraịst.
Ndị Nifaị na-edebe iwu nke Moses, na-ele anya ọbịbịa nke Kraịst, ma na-eme nke ọma n’ime ala ahụ—Ọtụtụ ndị-amụma rụrụ ọrụ idebe ndị mmadụ n’ụzọ nke ezi-okwu. Ihe dịka n’afọ 399 ruo 361 tutu amụọ Kraịst.
Ọmnaị, Amarọn, Kemịsh, Abinadọm, Amalakaị, nke ọbụla mgbe o ruru ya, na edebe akụkọ-ndekọta nile—Mosaịa wee chọpụta ndị Zarahemla, ndị sitere Jerusalem bịa n’ụbọchị nile nke Zedekaịa—Mosaịa ka e mere eze ha—Ndị agbụrụ Miulek bi na Zarahemla achọpụtawọrịị Koriantamọ, nke ikpe-azụ na ndị Jared—Eze Benjamịn wee sotebe Mosaịa—Ndị mmadụ kwesịrị inye mkpụrụ-obi ha dịka onyinye nye Kraịst. Ihe dịka n’afọ 323 ruo 130 tutu amụọ Kraịst.
Mọmọn wee dee epekele ndị nnukwu nke Nifaị na nke-nke—O wee debekọta epekele ndị nke ntakịrị na epekele ndị nke ọzọ—Eze Benjamịn wee hiwe udo n’ala ahụ. Ihe dịka n’afọ 385 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Eze Benjamịn wee kuziere ụmụ ya asụsụ na amụma nile nke ndị nna ha—Okpukpe-chi na mmepe-anya ha ka e chekwaworo n’ihi ihe akụkọ-ndekọta nile e debere n’epekele nile dị iche iche—Mosaịa ka a họpụtara dịka eze ma nye ọrụ ilekọta ihe akụkọ-ndekọta nile na ihe ndị ọzọ nile. Ihe dịka n’afọ 130 ruo 124 tutu amụọ Kraịst.
Eze Benjamịn wee gwa ndị ya okwu—O wee gụgharịa izi-ezi ahụ, akpaghị oke, na ndụ nke mụọ dị n’ọchịchị ya—O wee dụọ ha ọdụ ijere Eze ha nke Elu-igwe ozi—Ndị na-enupu-isi megide Chineke ga-ata nnukwu ahụhụ mgbu dịka ọkụ a na-apụghị imenyụ emenyụ. Ihe dịka n’afọ 124 tutu amụọ Kraịst.
Eze Benjamịn wee gaa n’iru n’ịgwa ha okwu—Onye-nwe nke Pụrụ Ime Ihe nile ga-ezisa ozi ọma n’etiti ndị mmadụ n’ụlọ nke ejiri ụrọ wuo—Ọbara ga-apụta site n’oghere ntakịrị ọbụla mgbe ọ na-achụ aja mgbaghara mmehie nile nke ụwa—Nanị aha ya bụ nke site na ya nzọpụta ga-abịa—Ndị mmadụ ga-ewepụ mmadụ nke anụ arụ ma ghọọ ndị Nsọ site n’Aja mgbaghara mmehie ahụ—Ntaram-ahụhụ nke ndị ajọọ-mmadụ ga-adị ka ọdọ-ọkụ na nkume-ọkụ. Ihe dịka n’afọ 124 tutu amụọ Kraịst.
Eze Benjamịn wee gaa n’iru n’okwu ya—Nzọpụta na-abịa n’ihi Aja mgbaghara mmehie ahụ—Kwere na Chineke ka a zọpụta gị—Dota nsachapụ nke mmehie unu nile site n’inwe okwukwe—Nye ndị ogbenye oke site n’ihe ọnwụnwe unu—Mee ihe nile na amamihe na usoro. Ihe dịka n’afọ 124 tutu amụọ Kraịst.
Ndị-nsọ nile ga-aghọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nke Kraịst site n’okwukwe—Mgbe ahụ ka a ga-akpọ ha n’aha nke Kraịst—Eze Benjamịn wee gbaa ha ume ịkwụsike na ịbụ akwa akwụrụ n’ọrụ ọma nile. Ihe dịka n’afọ 124 tutu amụọ Kraịst.
Eze Benjamịn wee dekọta aha nile nke ndị ahụ ma họpụta ndị nchụ-aja ịkụziri ha—Mosaịa wee chịa dịka eze ezi-omume. Ihe dịka n’afọ 124 ruo 121 tutu amụọ Kraịst.
Amọn wee chọta ala nke Lihaị-Nifaị, ebe Lịmhaị bụ eze—Ndị nke Lịmhaị nọ n’ịbụ-oru n’aka ndị Leman—Lịmhaị wee kọgharịa akụkọ ha—Onye-amụma (Abịnadaị) agbawọrịị ama na Kraịst bụ Chineke ahụ na Nna nke ihe nile—Ndị nke na-akụ mkpụrụ iru-inyi na-aghọta ufufe gburu-gburu, ma ndị nke na-etinye ntụkwasị obi ha n’ime Onye-nwe ka a ga-anapụta. Ihe dịka n’afọ 121 tutu amụọ Kraịst.
Amọn wee kuziere ndị nke Lịmhaị—Ọ mụrụ ihe banyere epekele iri abụọ na anọ nke ndị Jared—Akụkọ-ndekọta ndị mgbe-ochie nile ndị ọhụ-ụzọ nwere ike ịtụgharị asụsụ ha—Ọdịghị onyinye dị ukwuu karịa ịhụ-ụzọ. Ihe dịka n’afọ 121 tutu amụọ Kraịst.
Zinịf wee duru otu lgwe mmadụ site na Zarahemla inweta ala nke Lihaị-Nifaị—Eze ndị Leman nyere ha ikike iketa ala ahụ—Enwere ọgụ dara n’etiti ndị Leman na ndị nke Zinịf. Ihe dịka n’afọ 200 ruo 187 tutu amụọ Kraịst.
Eze Leman wee nwụọ—Ndị ya bụ ndị ime ọhịa ma dị egwu ma kwere na omenala ụgha nile—Zinịf na ndị ya wee nwe mmeri megide ha. Ihe dịka n’afọ 187 ruo 160 tutu amụọ Kraịst.
Eze Noa wee na-achị n’ajọọ-omume—Ọ na-an̄ụrị n’ime ibi ndụ ọgba-aghara ya na ndị nwunye ya na ndị iko ya nile—Abịnadaị wee na-ebu-amụma na ndị ahụ a ga-eweba ha n’ime ịbụ-oru—Ndụ ya ka Eze Noa na-achọ. Ihe dịka n’afọ 160 ruo 150 tutu amụọ Kraịst.
E tinyere Abịnadaị n’ụlọ-mkpọrọ n’ihi ibu-amụma mbibi nke ndị ahụ na ọnwụ nke Eze Noa—Ndị nchụ-aja ụgha na-en̄omi akwụkwọ-nsọ ma na-eme dịka ha na-edebe iwu nke Moses—Abịnadaị malitere ịkuziri ha Iwu Iri nile. Ihe dịka n’afọ 148 tutu amụọ Kraịst.
E chedoro Abịnadaị site n’ike dị nsọ—O wee kuzie Iwu Iri nile—Nzọpụta anaghị abịa site n’iwu nke Moses nanị—Chineke n’onwe Ya ga-achụ aja mgbaghara mmehie ma gbapụta ndị Ya. Ihe dịka n’afọ 148 tutu amụọ Kraịst.
Aịsaịa wee kwuo dịka Mesaịa—Mweda-ala Mesaịa ahụ na ahụhụ nile ka a kọwasịworo—Ọ wee mee mkpụrụ-obi ya ihe ịchụ-aja nke mmehie ma na-arịọrọ ndị mmehie arịrịọ—Tulee Aịsaịa 53. Ihe dịka n’afọ 148 tutu amụọ Kraịst.
Otu Kraịst siri bụrụ Nna na Ọkpara—Ọ ga-arịọchịte arịrịọ ma buru njehie nile nke ndị ya—Ha na ndị-amụma nile dị nsọ bụ mkpụrụ afọ ya—Ọ na-eweta na mmezu Mbilite-n’ọnwụ ahụ—Ụmụntakịrị nwere ndụ ebighi-ebi. Ihe dịka n’afọ 148 tutu amụọ Kraịst.
Chineke na-agbapụta ndị mmadụ site n’ọnọdụ ofufu na ọdịda ha—Ndị nọ n’anụ-arụ n’anọgide dịka ọdịghị mgbapụta dị—Kraịst na-eweta na mmezu mbilite n’ọnwụ ruo ndụ agwụgh-agwụ ma-ọbụ ọmụma-ikpe agwụgh-agwụ. Ihe dịka n’afọ 148 tutu amụọ Kraịst.
Alma kwenyere ma dee okwu nile nke Abịnadaị—Abịnadaị tara ahụhụ ọnwụ site n’ọkụ—O buru-amụma ọrịa na ọnwụ site n’ọkụ n’arụ ndị gburu ya. Ihe dịka n’afọ 148 tutu amụọ Kraịst.
Alma kwusara ozi-ọma na nzuzo—Ọ kọwara ọgbụgba-ndụ nke baptism ma mee baptism na mmiri nile nke Mọmọn—Ọ haziri nzukọ-nsọ nke Kraịst ma chie ndị nchụ-aja echichi—Ha kwadoro onwe ha ma kụziere ndị mmadụ ihe—Alma na ndị ya wee gbanarị Eze Noa baa n’ime ọzara ahụ. Ihe dịka n’afọ 147 ruo 145 tutu amụọ Kraịst.
Gịdiọn wee chọọ igbu Eze Noa—Ndị Leman wee buso ala ahụ agha—Eze Noa wee taa-ahụhụ ọnwụ site n’ọkụ—Lịmhaị wee chịa dịka eze ụtụ. Ihe dịka n’afọ 145 ruo 121 tutu amụọ Kraịst.
Ụfọdụ ụmụada ndị Leman ka ndị nchụ-aja nke Noa tọọrọ—Ndị Leman wee buso Lịmhaị na ndị ya agha—Igwe ndị Leman ahụ ka a chụghachịrị azụ ma mee ka ha daa juu. Ihe dịka n’afọ 145 ruo 123 tutu amụọ Kraịst.
Ndị Lịmhaị ka ndị Leman busoro agha ma merie—Ndị Lịmhaị wee zute Amọn ma nwee mgbanwe okpukpe-chi—Ha wee gwa Amọn maka epekele ndị Jared iri abụọ na anọ ahụ. Ihe dịka n’afọ 122 ruo 121 tutu amụọ Kraịst.
E mere atụmatụ nile maka ndị ahụ ịgbapụ site n’ịbụ-oru ndị Leman—Ndị Leman ka e mere ka mmanya na-egbu ha—Ndị ahụ gbapụrụ, lagachị Zarahemla, ma ghọọ ndị nọ n’okpuru ọchịchị nke Eze Mosaịa. Ihe dịka n’afọ 121 ruo 120 tutu amụọ Kraịst.
Alma wee jụ ibu eze—O wee jee-ozi dịka onye isi nchụ-aja—Onye-nwe wee taa ndị ya ahụhụ, ma ndị Leman wee merie ala nke Hilam—Amiulọn, onye-ndu nke ndị nchụ-aja ajọọ-omume nke Eze Noa, wee chịa n’okpuru eze ndị Leman. Ihe dịka n’afọ 145 ruo 121 tutu amụọ Kraịst.
Amiulọn wee sogbuo Alma na ndị ya—A ga-egbu ha ma ha kpee ekpere—Onye-nwe wee mee ibu-arọ ha nile ka ha dịka ha dị mfe—Ọ napụtara ha site n’ịbụ-oru, ma ha laghachịrị Zarahemla. Ihe dịka n’afọ 145 ruo 120 tutu amụọ Kraịst.
Ndị agbụrụ nke Miulek bi na Zarahemla wee ghọọ ndị Nifaị—Ha matara maka ndị Alma na maka ndị Zinịf—Alma wee mee Lịmhaị baptism na ndị ya nile—Mosaịa wee nye Alma ikike ịhazi Nzukọ-nsọ nke Chineke. Ihe dịka n’afọ 120 tutu amụọ Kraịst.
Ọtụtụ ndị otu Nzukọ-nsọ ahụ ka e dubara n’ime mmehie site n’aka ndị na-ekweghị-ekwe—Alma ka e kwere nkwa ndụ ebighi-ebi—Ndị chegharịrị ma e mee ha baptism ritara mgbaghara mmehie—Ndị otu Nzukọ-nsọ nọ n’ime mmehie ndị chegharịrị ma kwupụtara Alma na Onye-nwe mmehie ha ka a ga-agbaghara; ma ọ dịghị otu a, a gaghị agụnye ha n’ọnụ-ọgụgụ ndị Nzukọ-nsọ. Ihe dịka n’afọ 120 ruo 100 tutu amụọ Kraịst.
Mosaịa jụrụ mkpagbu ma nye iwu ịha n’otu—Alma nke nta na ụmụ nwoke anọ nke Mosaịa wee chọọ ibibi Nzukọ-nsọ ahụ—Mụọ-ozi wee pụta ma nye ha iwu ịkwụsị ajọọ-ụzọ ha—Alma ka a kụrụ ogbu—Mmadụ nile ka a ga-amụrịrị ọzọ iji nweta nzọpụta—Alma na ụmụ nwoke nke Mosaịa kwupụtara ozi ọma. Ihe dịka n’afọ 100 ruo 92 tutu amụọ Kraịst.
Ụmụ nwoke nile nke Mosaịa wee gaa ikwusa ozi-ọma nye ndị Leman—Ebe o ji okwute ọhụ-ụzọ-abụọ ahụ, Mosaịa tụgharịrị asụsụ epekele nile nke ndị Jared. Ihe dịka n’afọ 92 tutu amụọ Kraịst.
Mosaịa wee tụpụta uche ka ahọpụta ndị-ikpe n’ọnọdụ onye eze—Ndị eze na-abụghị ndị ezi-omume na-edụba ndị ha n’ime mmehie—Alma nke ka bụrụ nwata ka a họpụtara onye-isi-ikpe site n’olu nke ndị ahụ—Ọ bụ kwa onye isi nchụ-aja na Nzukọ-nsọ ahụ—Alma nke ka bụrụ Okenye na Mosaịa wee nwụọ. Ihe dịka n’afọ 92 ruo 91 tutu amụọ Kraịst.
Nihọ wee kuzie ozizi ụgha nile, wee hiwe otu nzukọ, wee webata nchụ-aja aghụghọ, ma wee gbuo Gịdiọn—Nihọ ka e gburu n’ihi mmebi iwu ya nile—Nchụ-aja aghụghọ na mkpagbu nile wee gbasasịa n’etiti ndị ahụ—Ndị nchụ-aja wee kwado onwe ha, ndị ahụ wee lekọta ndị ogbenye, ma Nzukọ-Nsọ ahụ wee mee nke ọma. Ihe dịka n’afo 91 ruo 88 tutu amụọ Kraịst.
Amlịsaị wee chọọ ịbụ eze ma a jụrụ ya site n’olu nke ndị ahụ—Ndị na-eso ya wee mee ya eze—Ndị Amlịsaị wee lụso ndị Nifaị ọgụ ma e meriri ha—Ndị Leman na ndị Amlịsaị wee jikọta ndị ọgụ ha nile ma e meriri ha—Alma wee gbuo Amlịsaị. Ihe dịka n’afọ 87 tutu amụọ Kraịst.
Ndị Amlịsaị kara onwe ha akara dịka ndị-amụma kwuworo—Ndị Leman ka a bụworo ọnụ n’ihi nnupụ-isi ha—Ndị mmadụ na-eweta ọbụbụ-ọnụ ha n’isi onwe ha—Ndị Nifaị wee merie ndị-agha nke ndị Leman ọzọ. Ihe dịka n’afo 87 ruo 86 tutu amụọ Kraịst.
Alma wee mee ọtụtụ puku ndị a gbanwere baptism—Ajọọ-omume wee bata n’ime nzukọ-nsọ ahụ, ma ọga n’iru nzukọ ahụ wee nwee mgbochi—Nifaịha ka ahọpụtara onye-isi-ikpe—Alma, dịka onye isi nchụ-aja, tinyere onwe ya n’ịgbasa ije-ozi ahụ. Ihe dịka n’afọ 86 ruo 83 tutu amụọ Kraịst.
Irite nzọpụta, ndị mmadụ ga-echegharịrị ma debe iwu-nsọ nile, bụrụ ndị a mụrụ ọzọ, sachaa uwe ha nile site n’ọbara nke Kraịst, dị umeala ma wezuga onwe ha site na mpako na ntaji anya, ma na-arụ ọrụ nile nke ezi-omume—Ezi onye-ọzụzụ atụrụ na-akpọ ndị ya—Ndị nke na-arụ ajọọ-ọrụ bụ ụmụ nke ekwensu—Alma wee gbaa ama maka ezi-okwu nke ozizi ya ma nye ndị mmadụ iwu ka ha chegharịa—Aha nile nke ndị ezi-omume ka a ga-ede n’akwụkwọ nke ndụ. Ihe dịka n’afọ 83 tutu amụọ Kraịst.
Nzukọ-nsọ ahụ dị na Zarahemla ka a sachara ma dozie n’usoro—Alma wee gaa Gịdiọn ikwusa ozi-ọma. Ihe dịka n’afọ 83 tutu amụọ Kraịst.
Kraịst ka a ga-amụ site na Meri—Ọ ga-atọpụ agbụ nile nke ọnwụ ma buru mmehie nile nke ndị ya—Ndị nke chegharịrị, e mee ha baptism, ma debe iwu-nsọ nile ga-enwe ndụ ebighi-ebi—Iru inyi enweghị ike iketa ala-eze nke Chineke—Ịdị umeala, okwukwe, olile-anya, na afọ-ọma ka a chọrọ. Ihe dịka n’afọ 83 tutu amụọ Kraịst.
Alma wee kwusaa ozi-ọma ma mee baptism na Melek—A jụrụ ya ajụ na Amọnaịha ma ọ hapụrụ—Otu mụọ-ozi nyere ya iwu ka ọ laghachị ma tie nchegharị nye ndị ya—Amiulek nabatara ya, ma ha abụọ wee kwusaa ozi-ọma na Amọnaịha. Ihe dịka n’afọ 82 tutu amụọ Kraịst.
Alma wee nye ndị Amọnaịha iwu ka ha chegharịa—Onye-nwe ga-emere ndị Leman ebere n’ụbọchị ikpe-azụ nile—Ọbụrụ na ndị Nifaị jụ ìhè ahụ, a ga-ebibi ha site na ndị Leman—Ọkpara nke Chineke ga-abia ọsọ-ọsọ—Ọ ga-agbapụta ndị chegharịrị, e mere baptism ma nwe okwukwe n’aha Ya. Ihe dịka n’afọ 82 tutu amụọ Kraịst.
Lihaị sitere n’agbụrụ Manase—Amiulek wee kọgharịa iwu mụọ-ozi nyere na ọ ga-elekọta Alma—Ekpere nile nke ndị ezi-omume mere ka e debe ndị ahụ—Ndị ọka-iwu n’ezighị-ezi na ndị-ikpe nile tọrọ ntọ-ala nke mbibi nke ndị ahụ. Ihe dịka n’afọ 82 tutu amụọ Kraịst.
Usoro ego nke ndị Nifaị ka a kọwara—Amiulek wee nwe ndọrọ-ndọrọ ya na Ziezrọm—Kraịst agaghị azọpụta ndị mmadụ n’ime mmehie ha nile—Nanị ndị ahụ ketara ala-eze nke elu-igwe bụ ndị azọpụtara—Mmadụ nile ga-ebili n’ime anwụ-anwụ—ọdịghị ọnwụ dị ma Mbilite n’Ọnwụ gasịa. Ihe dịka n’afọ 82 tutu amụọ Kraịst.
Alma wee dọọ ndọrọ-ndọrọ ya na Ziezrọm—Ihe omimi nile nke Chineke ka a ga-enye nanị ndị nwere okwukwe—Ndị mmadụ ka a ga-ekpe ikpe site n’echiche ha nile, okwukwe nile, okwu nile, na ọrụ nile—Ndị ajọọ omume ka a ga-ata ahụhụ ọnwụ nke mụọ—Ndụ arụ a n’anwụ-anwụ bụ ọnọdụ mnwale—Atụmatụ nke mgbapụta na-eweta Mbilite n’Ọnwụ ahụ ma, site n’okwukwe, nsachapụ nke mmehie nile—Ndị chegharịrị nwere oke n’ebere site n’Ọkpara a Mụrụ Nanị Ya. Ihe dịka n’afọ 82 tutu amụọ Kraịst.
A na-akpọ ndị mmadụ dịka ndị isi nchụ-aja n’ihi okwukwe ha karịrị akarị na ọrụ ọma nile—Ha ga-akụzi iwu-nsọ nile ahụ—Site n’ezi-omume a na-asacha ha ma baa n’ime izu-ike nke Onye-nwe—Melkizedek bụụrụ otu n’ime ndị a—Ndị mụọ-ozi na-ekwupụta ozi ọma nile nʼakụkụ nile nke ala ahụ—Ha ga-ekpughe ezigbo ọbịbịa nke Kraịst. Ihe dịka n’afọ 82 tutu amụọ Kraịst.
Alma na Amiulek ka e tinyere n’ụlọ mkpọrọ ma tie ha otiti ihe—A kpọrọ ndị kwere ekwe na akwụkwọ-nsọ ha ọkụ—Ndị a nile e gburu n’ihi okwukwe ha nwere n’ebe Jisus nọ ka Onye-nwe nabatara n’otuto—Mgbidi nile nke ụlọ-mkpọrọ ka e tiwara ma ha daa—Alma na Amiulek ka a napụtara, ma ndị na-esogbu ha ka e gburu. Ihe dịka n’afọ 82 ruo 81 tutu amụọ Kraịst.
Alma na Amiulek wee gaa na Saịdọm ma hiwe otu nzukọ-nsọ—Alma wee gwọọ Ziezrọm, onye sonyere Nzukọ-nsọ ahụ—Ọtụtụ ka e mere baptism, ma Nzukọ-nsọ ahụ mere nke ọma—Alma na Amiulek wee gaa Zarahemla. Ihe dịka n’afọ 81 tutu amụọ Kraịst.
Ndị Leman wee bibie ndị nke Amọnaịha—Zorọm wee duru ndị Nifaị ruo na mmeri nke ndị Leman—Alma na Amiulek na ọtụtụ ndị ọzọ kwusara okwu ahụ—Ha wee kụzie na mgbe o sịworo n’ọnwụ bilie Kraịst ga-egosị ndị Nifaị onwe ya. Ihe dịka n’afọ 81 ruo 77 tutu amụọ Kraịst.
Ụmụ Mosaịa ndị nwoke nwere mụọ nke ibu-amụma na nke mkpughe—Ha gara ụzọ dị iche iche nke onwe ha ikwupụta okwu ahụ nye ndị Leman—Amọn wee gaa ala nke Ịshmel ma ghọọ nwa-oru nke Eze Lamonaị—Amọn wee zọpụta igwe-atụrụ nile nke eze ahụ ma wee gbuo ndị iro ya nile na mmiri nke Sibọs. Ama-okwu nile nke 1 ruo 3, ihe dịka n’afọ 77 tutu amụọ Kraịst; ama-okwu nke 4, ihe dịka n’afọ 91 ruo 77 tutu amụọ Kraịst; na ama-okwu nile nke 5 ruo 39, ihe dịka n’afọ 91 tutu amụọ Kraịst.
Eze Lamonaị wee chee na Amọn bụ Nnukwu Mụọ ahụ—Amọn wee kuziere eze ahụ maka Okike, maka mmekọrịta nile nke Chineke na ndị mmadụ, na maka mgbapụta ahụ nke na-abịa site na Kraịst—Lamonaị wee kwere ma daa n’ala dịka ọ nwụwo. Ihe dịka n’afọ 90 tutu amụọ Kraịst.
Lamonaị wee nata ìhè nke ndụ mgbe nile na-adigide ma wee hụ Onye-mgbapụta ahụ—Ezi na ụlọ ya wee daba n’ime ọnọdụ amaghị onwe, ma ọtụtụ ndị na-ahụ ndị mụọ-ozi—Amọn ka e chekwara n’ụzọ ịtụ n’anya—O wee mee ọtụtụ baptism ma wee hiwe otu nzukọ-nsọ n’etiti ha. Ihe dịka n’afọ 90 tutu amụọ Kraịst.
Onye-nwe wee ziga Amọn Mịdonaị ịnapụta ụmụnne ya nwoke a tụrụ mkpọrọ—Amọn na Lamonaị zutere nna Lamonaị, onye bụ eze n’ala ahụ nile—Amọn wee manye okenye eze ahụ ka ọ kwado nhapụ ụmụnne ya nwoke ka ha nwere onwe ha. Ihe dịka n’afọ 90 tutu amụọ Kraịst.
Erọn wee kụziere ndị Amalek maka Kraịst na aja mgbaghara mmehie ya—Erọn na ụmụnne ya nwoke ka atụrụ mkpọrọ na Mịdonaị—Mgbe anapụtaworo ha, ha wee kụzie ihe n’ụlọ-nzukọ chi nile ahụ ma nweta ọtụtụ ndị a gbanwere—Lamonaị wee kwenye inye ndị ahụ nọ n’ala nke Ịshmel inwere onwe nke okpukpe-chi. Ihe dịka n’afọ 90 ruo 77 tutu amụọ Kraịst.
Erọn wee kụziere nna Lamonaị maka Okike ụwa, ọdịda nke Adam, na atụmatụ nke mgbapụta site na Kraịst—Eze ahụ na ndị ezi na ụlọ ya nile ka a gbanwere—Okike ala n’etiti ndị Nifaị na ndị Leman ka a kọwara. Ihe dịka n’afọ 90 ruo 77 tutu amụọ Kraịst.
Inwere-onwe nke okpukpe-chi ka a mara ọkwa ya—Ndị Leman n’ime ala na obodo-ukwu asaa ka a gbanwere—Ha kpọrọ onwe ha ndị Antai-Nifaị-Lihaị ma mee ka ha nwere onwe ha site n’ọbụbụ-ọnụ ahụ—Ndị Amalek na ndị Amiulọn wee jụ ezi-okwu ahụ. Ihe dịka n’afọ 90 ruo 77 tutu amụọ Kraịst.
Ndị Leman bịara imegide ndị nke Chineke—Ndị Antai-Nifaị-Lihaị wee n̄ụrịa ọn̄ụ n’ime Kraịst ma ndị mụọ-ozi letara ha—Ha họọrọ ịta-ahụhụ ọnwụ karịa ichekwa onwe ha—Ọtụtụ ndị Leman ọzọ ka a gbanwere. Ihe dịka n’afọ 90 ruo 77 tutu amụọ Kraịst.
Ibu agha nile nke ndị Leman wee gbasasịa—Mkpụrụ-afọ nke ndị nchụ-aja nke Noa wee laa n’iyi dịka Abịnadaị siri buo amụma—Ọtụtụ ndị Leman ka a gbanwere ma sonyere ndị nke Antai-Nifaị-Lihaị—Ha kwere na Kraịst ma na-edebe iwu nke Moses. Ihe dịka n’afọ 90 ruo 77 tutu amụọ Kraịst.
Amọn na-enwe an̄ụrị n’ime Onye-nwe—Ndị okwukwe ka Onye-nwe na-agba ume ma a na-enye ha ọmụma ihe—Site n’okwukwe ndị mmadụ nwere ike iweta ọtụtụ puku mkpụrụ-obi na nchegharị—Chineke nwere ike nile ma na-aghọta ihe nile nke ọma. Ihe dịka n’afo 90 ruo 77 tutu amụọ Kraịst.
Onye-nwe wee nye Amọn iwu idu ndị nke Antai-Nifaị-Lihaị ruo na nchekwa—N’izute Alma, ọn̄ụ Amọn wee werechaa ume ya—Ndị Nifaị wee nye ndị Antai-Nifaị-Lihaị ala nke Jeshọn—Akpọrọ ha ndị nke Amọn. Ihe dịka n’afọ 90 ruo 77 tutu amụọ Kraịst.
Emeriri ndị Leman n’agha dị egwu—Iri iri puku nile ka e gburu—Ndị ajọọ-omume ka e nyefere ịnọ n’ọnọdụ ahụhụ agwụgh-agwụ; ndị ezi-omume ga-enweta an̄ụrị na-adịghị agwụ-agwụ. Ihe dịka n’afọ 77 ruo 76 tutu amụọ Kraịst.
Alma chọrọ iti mkpu nchegharị jiri ọnụnụ ọkụ n’obi nke mụọ-ozi—Onye-nwe nyere ndị nkụzi maka mba nile—Alma nwere an̄ụrị n’ọrụ nke Onye-nwe na n’inwe mmeri nke Amọn na ụmụnne ya nwoke. Ihe dịka n’afọ 76 tutu amụọ Kraịst.
Kọrịhọ, onye-mmegide Kraịst, jiri Kraịst mee ihe ọchị, Aja mgbaghara mmehie ahụ, na mụọ nke ibu-amụma—Ọ na-akụzi na ọdịghị Chineke dị, ọdịghị ọdịda nke mmadụ dị, ọdighị ntaram-ahụhụ maka mmehie dị, na ọdịghị Kraịst dị—Alma gbara ama na Kraịst ga-abịa ma na ihe nile na-egosị na e nwere otu Chineke dị—Kọrịhọ rịọrọ ịhụ ihe iriba-ama ma e mere ka ọ daa ogbu—Ekwensu apụtakwuruworịị Kọrịhọ dịka mụọ-ozi ma kuziere ya ihe ọ ga-ekwu—Kọrịhọ ka azọdara ma ọ nwụrụ. Ihe dịka n’afọ 76 ruo 74 tutu amụọ Kraịst.
Alma wee duru ndị-ozi ịga kpọghachị ndị Zorọm gọnarịrị okwukwe ahụ—Ndị Zorọm ahụ wee gọnarị Kraịst, kwere n’ihe kpatara nhọpụta nke ụgha, ma na-efe ofufe jiri ekpere nile edoziri-edozi—Ndị-mgbasa ozi-ọma nile jupụtara na Mụọ Nsọ—Mkpagbu ha nile ka e lomiri n’ime ọn̄ụ nke Kraịst. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Alma wee kụziere ndị ogbenye ndị mkpagbu ha nile meworo obi umeala—Okwukwe bụ olile-anya n’ihe nke ana-ahụbeghị anya nke bụ ezi-okwu—Alma wee gbaa ama na ndị mụọ-ozi na-akụziri ndịkom, ndịnyom, na ụmụ-ntakịrị ihe—Alma wee tụnyere okwu ahụ mkpụrụ-akụkụ—A ga-akụrịrị ya ma zụọ ya—Mgbe ahụ ọ ga-eto ghọọ osisi site na nke a ga-esi ghọta mkpuru-osisi nke ndụ-ebighi-ebi. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Zinọs kụziri na ndị mmadụ kwesịrị ikpe ekpere ma fee ofufe n’ebe nile, ma na ikpe nile ka e wezugara n’ihi Ọkpara ahụ—Zinọk kụziri na a na-eme ebere n’ihi Ọkpara ahụ—Moses ewelitewo n’ime ọzara ahụ otu ụdị nke Ọkpara nke Chineke ahụ. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Amiulek wee gbaa ama na okwu ahụ dị n’ime Kraịst ruo nzọpụta—Ma ọbụghị na-achụrụ aja mgbaghara mmehie, mmadụ nile ga-alarịrị n’iyi—Iwu nile nke Moses na-arụ aka nʼịchụ-aja nke Ọkpara Chineke ahụ—Atụmatụ ebighi-ebi nke mgbapụta ahụ gbakwasịrị ụkwụ n’okwukwe na nchegharị—Kpee ekpere maka ngọzi nile nke arụ na nke mụọ—Ndụ nke a bụ oge dịrị ndị mmadụ ịkwado ịgakwuru Chineke—Rụpụta nzọpụta unu jiri-egwu n’iru Chineke. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Ikwusaa okwu ahụ wee bibie aghughọ nke ndị Zorọm—Ha wee chụpụ ndị nile gbanwere, ndị sonyere ndị nke Amọn na Jeshọn mgbe ahụ—Alma wee nọdụ na mwute n’ihi ajọọ-omume nke ndị ahụ. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Alma wee gbaara Hilaman ama maka mgbanwe ya mgbe ọ hụsịworo mụọ-ozi—Ọ tara ahụhụ mgbu nile nke mkpụrụ-obi a mara ikpe; ọ kpọkuru aha nke Jisus, ma e wee mụọ ya site na Chineke—Ọn̄ụ-ụtọ jupụtara mkpụrụ-obi ya—Ọ hụrụ ìgwè ndị mụọ-ozi na-eto Chineke—Ọtụtụ ndị gbanweworo edetuwo ya ire ma hụwo dịka o detụworo ya ire ma hụwo. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Epekele nile nke bras ahụ na akwụkwọ-nsọ ndị ọzọ ka e dokwara iweta mkpụrụ-obi nile na nzọpụta—Ndị Jared ka e bibiri n’ihi ajọọ-omume ha—In̄ụ-iyi nzuzo ha nile na ọgbụgba-ndụ nile ka a ga-ewezugariri site n’ebe ndị ahụ nọ—Nata ndụmọdụ n’aka Onye-nwe n’ihe nile unu na-eme—Dịka Liahona ahụ siri duo ndị Nifaị, otu ahụ ka okwu nke Kraịst na-edu ndị mmadụ ruo ndụ-ebighi-ebi. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
E sogburu Shịblọn n’ihi ezi-omume—Nzọpụta dị n’ime Kraịst, onye bụ ndụ na ìhè nke ụwa—Jikọlata onwe gị nʼihe nile metụtasịrị gị ike. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Mmehie mmekọrịta nwoke na nwanyị bụ ihe arụ—Mmehie nile nke Koriantọn gbochiri ndị Zorọm site n’ịnata okwu ahụ—Mgbapụta nke Kraịst na-egosipụta mmetụta n’ịzọpụta ndị okwukwe ndị biri tutu emee ya. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Kraịst na-eweta na mmezu mbilite n’ọnwụ nke ndị mmadụ nile—Ndị ezi-omume nwụrụ anwụ ga-aga na paradaịs ma ndị ajọọ-omume n’ọchịchịrị nke ezi ichere ụbọchị nke mbilite-n’ọnwụ ha—A ga-eweghachi ihe nile na ụdị zịrị ezi na ụdị zuru-oke na Mbilite n’Ọnwụ ahụ. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Na Mbilite n’Ọnwụ ahụ ndị mmadụ ga-apụta n’ọnọdụ nke an̄ụrị agwụgh-agwụ ma-ọbụ nhuju-anya agwụgh-agwụ—Ajọọ-omume adịghị mgbe ọ bụ an̄ụrị—Ndị nke anụ arụ nọ n’enweghị Chineke n’ụwa—Onye ọbụla na-anata ọzọ na mweghachi ahụ ụdị nile na ụdị omume nile ọ mụtara n’arụ na-anwụ anwụ. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Ịnwụ anwụ bụ oge mnwale inyere mmadụ aka ichegharị ma jeere Chineke ozi—Ọdịda ahụ wetara ọnwụ nke arụ na nke mụọ nye mmadụ nile—Mgbapụta na-abịa site na nchegharị—Chineke n’onwe ya na-achụ aja mgbaghara mmehie nile nke ụwa—Ebere bụ maka ndị chegharịrị—Ndị ọzọ nile nọ n’okpuru ikpe zịrị-ezi nke Chineke—Ebere na-abịa n’ihi Aja mgbaghara mmehie ahụ—Nanị ndị nwere ezigbo nchegharị ka a ga-azọpụta. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Alma na ụmụ ya nwoke wee kwusaa okwu ahụ—Ndị Zorọm na ndị nghọtahie ndị Nifaị ndị ọzọ wee ghọọ ndị Leman—Ndị Leman wee bịa imegide ndị Nifaị n’agha—Moronaị wee nye ndị Nifaị ngwa-agha nke mgbochi—Onye-nwe wee kpugheere Alma ụzọ aghụghọ agha nke ndị Leman—Ndị Nifaị wee chekwaa ebe obibi ha nile, ntọhapụ nile, ezi na ụlọ ha nile, na okpukpe-chi—Ndị-agha nile nke Moronaị na Lihaị wee gbaa ndị Leman gburu-gburu. Ihe dịka n’afọ 74 tutu amụọ Kraịst.
Moronaị wee nye ndị Leman iwu ime ọgbụgba-ndụ udo ma-ọbụ e bibie ha—Zerahemna wee jụ onyinye ahụ, ma ọgụ wee malite ọzọ—Ndị-agha Moronaị wee merie ndị Leman. Ihe dịka n’afọ 74 ruo 73 tutu amụọ Kraịst.
Hilaman wee kwere n’okwu nile nke Alma—Alma wee buo-amụma mbibi nke ndị Nifaị—O wee gọzie ma bụọ ala ahụ ọnụ—E nwere ike ekuliteworịị Alma elu site na Mụọ, ọbụna dịka Moses—Nghọtahịe wee na-eto na Nzukọ-nsọ ahụ. Ihe dịka n’afọ 73 tutu amụọ Kraịst.
Amalakaịa wee gbaa izu-ọjọọ ịbụ eze—Moronaị wee welite ákàrà ntọhapụ ahụ—O wee kpọkọta ndị ahụ ọnụ ichekwa okpukpe-chi ha—Ndị kwere-ekwe n’ezi-okwu ka a kpọrọ ndị-otu-Kraịst—Ụfọdụ ndị nke Josef ka a ga-echekwa—Amalakaịa na ndị nghọtahịe wee gbaga ala nke Nifaị—Ndị na-agaghị akwado ụzọ nke inwere-onwe e gburu ha. Ihe dịka n’afọ 73 ruo 72 tutu amụọ Kraịst.
Amalakaịa wee jiri aghụghọ, igbu-mmadụ, na mgba-okpuru ịbụrụ eze ndị Leman—Ndị nghọtahie Nifaị nwere ajọọ-omume ma dị egwu karịa ndị Leman. Ihe dịka n’afọ 72 tutu amụọ Kraịst.
Amalakaịa wee kpasuo ndị Leman imegide ndị Nifaị—Moronaị wee kwado ndị ya ichekwa ụzọ ndị nke Kraịst—Ọ na-enwe ọn̄ụ na ntọhapụ na inwere-onwe ma bụrụ nwoke dị ike nke Chineke. Ihe dịka n’afọ 72 tutu amụọ Kraịst.
Ndị Leman na-aba-ọgụ enweghị ike ịwere obodo-ukwu nile e wusịrị-ike nke Amọnaịha na Noa—Amalakaịa wee kọchaa Chineke ma n̄ụọ iyi ịn̄ụ ọbara nke Moronaị—Hilaman na ụmụnne ya nwoke gara n’iru ịgba Nzukọ-nsọ ahụ ume. Ihe dịka n’afọ 72 tutu amụọ Kraịst.
Moronaị wee wusie ala nile nke ndị Nifaị ike—Ha wee wuo ọtụtụ obodo-ukwu ọhụrụ—Ọtụtụ agha na mbibi wee dakwasị ndị Nifaị n’ụbọchị nile nke ajọọ-omume ha na ihe arụ nile—Moriantọn na ndị nghọtahịe ya nile Tiankọm meriri ha—Nifaịha wee nwụọ, ma nwa ya nwoke Pehoran wee nọchie oche-ikpe ahụ. Ihe dịka n’afọ 72 ruo 67 tutu amụọ Kraịst.
Ndị ọchọ-eze ahụ wee chọọ imegharị iwu ma hiwe onye eze—Pehoran na ndị nwe-onwe-ha ka a kwadoro site n’olu nke ndị ahụ—Moronaị wee kwagide ndị ọchọ-eze ahụ ichekwa mba ha ma-ọbụ e gbuo ha—Amalakaịa na ndị Leman wee nweta ọtụtụ obodo-ukwu ndị e wusiri-ike—Tiankọm wee gbochie ịba-ọgụ ndị Leman ma gbuo Amalakaịa n’ụlọ-ịkwuu ya. Ihe dịka n’afọ 67 ruo 66 tutu amụọ Kraịst.
Amorọn wee nọchịe Amalakaịa dịka eze ndị Leman—Moronaị, Tiankọm, na Lihaị wee duo ndị Nifaị n’agha mmeri megide ndị Leman—Obodo-ukwu nke Miulek e weghachiri ya, ma Jekọb onye nke Zorọm e gburu ya. Ihe dịka n’afọ 66 ruo 64 tutu amụọ Kraịst.
Ndị-mkpọrọ nke ndị Leman ka e jiri wusie obodo-ukwu Uju ahụ ike—Nghọtahịe nile dị n’etiti ndị Nifaị kpatara mmeri nile nke ndị Leman meriri—Hilaman wee were ọchịchị nke ụmụ okorọbịa puku abụọ bụ ụmụ nwoke nke ndị nke Amọn. Ihe dịka n’afọ 64 ruo 63 tutu amụọ Kraịst.
Amorọn na Moronaị wee kwuzie maka ịgbanwe ndị-mkpọrọ nile—Moronaị wee rịọ ka ndị Leman laghachị-azụ ma kwụsị ibuso-agha igbu mmadụ ha nile—Amorọn wee chọọ ka ndị Nifaị tọgbọ ngwa-agha ha nile ma nọrọzie n’okpuru ndị Leman. Ihe dịka n’afọ 63 tutu amụọ Kraịst.
Moronaị wee jụ ịgbanwe ndị-mkpọrọ—Ndị nche nke ndị Leman a ghọgburu ha ịn̄ụbiga mmanya oke, ma ndị-mkpọrọ nke ndị Nifaị e mere ka ha nwere onwe ha—Obodo-ukwu nke Gịd e weere ya na-enweghị nkwafu-ọbara. Ihe dịka n’afọ 63 ruo 62 tutu amụọ Kraịst.
Hilaman wee zigara Moronaị akwụkwọ-ozi, na-agụgharị ọnọdụ nke agha ha na ndị Leman lụrụ—Antịpụs na Hilaman wee nwee nnukwu mmeri n’ebe ndị Leman nọ—Ụmụ-okorọbịa puku abụọ nke Hilaman wee jịrị ike ọrụ-ebube lụọ-ọgụ, ma ọdịghị onye ọbụla n’ime ha e gburu. Ama-okwu 1, ihe dịka n’afọ 62 tutu amụọ Kraịst; ama-okwu 2 ruo 19, ihe dịka n’afọ 66 tutu amụọ Kraịst; na ama-okwu 20 ruo 57, ihe dịka n’afọ 65 ruo 64 tutu amụọ Kraịst.
Hilaman wee kọgharịa mwere nke Antịpara na nnyefe ahụ ma n’ikpe-azụ nchekwa nke Kumenaị—Ụmụ-okorọbịa ya ndị Amọn wee lụọ-ọgụ ka ndị bụ dike; ha nile merụrụ arụ, mana ọdịghị onye-ọbụla n’ime ha e gburu—Gịd wee kọọ ogbugbu na mgbapụ nke ndị-mkpọrọ nke ndị Leman. Ihe dịka n’afọ 63 tutu amụọ Kraịst.
Hilaman, Gịd, na Tiọmna wee were obodo-ukwu nke Mantaị site n’aghụghọ agha—Ndị nke Leman wee laghachị azụ—Ụmụ nwoke nile nke Amọn e chekwara ha dịka ha siri guzosịe ike na nchekwa nke ntọhapụ na okwukwe ha. Ihe dịka n’afọ 63 ruo 62 tutu amụọ Kraịst.
Moronaị wee gwa Pehoran ka ọ gbaa ndị-agha nke Hilaman ume—Ndị Leman wee were obodo-ukwu nke Nifaịha—Moronaị weere ndị-ọchịchị iwe. Ihe dịka n’afọ 62 tutu amụọ Kraịst.
Moronaị wee kpesara Pehoran maka otu ndị-ọchịchị siri n’eleghara ndị-agha nile ahụ anya—Onye-nwe na-ekwe ka e gbuo ndị-ezi-omume—Ndị Nifaị ga-ejirịrị ike ha nile na ihe nile ha nwere napụta onwe ha site n’aka ndị-iro ha nile—Moronaị wee majaa ịlụso ndị-ọchịchị ọgụ ma ọbụghị na e wetaara ndị-agha ya nile enyem-aka. Ihe dịka n’afọ 62 tutu amụọ Kraịst.
Pehoran wee gwa Moronaị maka ọgba-aghara na nnupụ-isi megide ndị ọchịchị ahụ—Ndị ọchọ-eze wee were Zarahemla ma nọọ na nkwekọrịta ha na ndị Leman—Pehoran wee rịọ maka enyem-aka ngwa-agha megide ndị nnupụ-isi ahụ nile. Ihe dịka n’afọ 62 tutu amụọ Kraịst.
Moronaị wee zọrọ-ije gaa inyere Pehoran aka n’ala nke Gịdiọn—Ndị ọchọ-eze ahụ jụrụ ichekwa mba ha e gburu ha—Pehoran na Moronaị wee wereghachị Nifaịha—Ọtụtụ ndị Leman sonyere ndị nke Amọn—Tiankọm wee gbuo Amorọn ma e gburu ya otu aka ahụ—Ndị Leman a chụpụrụ ha site n’ala ahụ, ma e hiwere udo—Hilaman wee laghachị n’ije-ozi ahụ ma wee wụlite Nzukọ-nsọ ahụ. Ihe dịka n’afọ 62 ruo 57 tutu amụọ Kraịst.
Shịblọn ma emesịa Hilaman wee were onwunwe nke akụkọ-ndekọta nile ahụ e dere ede dị nsọ—Ọtụtụ ndị Nifaị wee gaa njem ruo n’ala dị n’elu-elu—Hagọt wee wuo ọtụtụ ụgbọ, ndị nke na-agba n’osimiri ọdịda-anyanwụ—Moronaịha wee merie ndị Leman n’agha. Ihe dịka n’afọ 56 ruo 52 tutu amụọ Kraịst.
Pehoran nke abụọ wee bụrụ onye-isi-ikpe ma Kịshkumen gburu ya—Pekiumenaị nọchiri oche-ikpe ahụ—Koriantamọ wee duo ndị-agha nke ndị Leman, wee were Zarahemla, ma gbuo Pekiumenaị—Moronaịha wee merie ndị Leman ma wereghachị Zarahemla, ma e gburu Koriantamọ. Ihe dịka nʼafọ 52 ruo 50 tutu amụọ Kraịst.
Hilaman, nwa nwoke nke Hilaman, wee ghọọ onye-isi-ikpe—Gadiantọn wee duo ndị otu Kịshkumen—Nwa-oru Hilaman wee gbuo Kịshkumen, ma ndị otu Gadiantọn wee gbaba nʼime ọzara. Ihe dịka nʼafọ 50 ruo 49 tutu amụọ Kraịst.
Ọtụtụ ndị Nifaị pụrụ obi gaa nʼala dị nʼelu-elu—Ha wuru ọtụtụ ụlọ simentị ma debe ọtụtụ akụkọ-ndekọta—Iri nile nke puku nile ka a gbanwere ma mee ha baptism—Okwu nke Chineke na-eduba ndị mmadụ na nzọpụta—Nifaị nwa-nwoke nke Hilaman nochiri oche-ikpe ahụ. Ihe dịka nʼafọ 49 ruo 39 tutu amụọ Kraịst.
Ndị nghọtahịe Nifaị na ndị Leman jikọtara ndị-agha nile ma were ala nke Zarahemla—Mmeri a na-emeri ndị Nifaị na-abịa n’ihi ajọọ-omume ha—Nzukọ-nsọ ahụ na-ala azụ, ma ndị ahụ ghọrọ ndị na-adịghị ike dịka ndị Leman. Ihe dịka nʼafọ 38 ruo 30 tutu amụọ Kraịst.
Nifaị na Lihaị nyefere onwe ha ikwusa ozi-ọma—Aha ha na-akpọ ha oku imezi ndụ ha dịka nke ndị bu ha ụzọ—Kraịst na-agbapụta ndị na-echegharị—Nifaị na Lihaị nwetara ọtụtụ ndị gbanwere ma a tụrụ ha mkpọrọ, ma ọkụ gbachibidoro ha gburu-gburu—Igwe-ojii nke ọchịchịrị kpuchidere ndị mmadụ dị narị atọ—Ụwa na-ama jijiji, ma otu olu na-enye ndị mmadụ iwu ka ha chegharịa—Nifaị na Lihaị wee kparịta ụka ha na ndị mụọ-ozi, ma igwe mmadụ ahụ ọkụ gbachibidoro ha gburu-gburu. Ihe dịka nʼafọ 30 tutu amụọ Kraịst.
Ndị ezi-omume ndị Leman kwusaara ndị ajọọ-omume ndị Nifaị ozi-ọma—Ndị mba abụọ ndị a mere nke ọma nʼoge udo na ụba—Lusịfa, onye mmalite nke mmehie, kwalitere obi nile nke ndị ajọọ-omume na ndị otu-ori Gadiantọn nʼigbu-mmadụ na ajọọ-omume—Ndị ori ahụ wee weghara ọchịchị ndị Nifaị. Ihe dịka nʼafọ 29 ruo 23 tutu amụọ Kraịst.
Nifaị ka a jụrụ nʼakụkụ elu-elu ma ọ laghachịrị na Zarahemla—O kpere ekpere nʼụlọ-elu tọwa ubi-nta ya ma mgbe ahụ kpọkuo ndị ahụ ka ha chegharịa ma-ọbụ laa nʼiyi. Ihe dịka nʼafọ 23 ruo 21 tutu amụọ Kraịst.
Ndị ikpe ruru inyi wee chọọ ịkpasu ndị ahụ iwe megide Nifaị—Abraham, Moses, Zinọs, Zinọk, Izaịas, Aịsaịa, Jeremaịa, Lihaị, na Nifaị ha nile gbara ama maka Kraịst—Site na nkwalite nke mụọ Nifaị wee kwupụta ogbugbu nke onye-isi-ikpe. Ihe dịka nʼafọ 23 ruo 21 tutu amụọ Kraịst.
Ndị-ozi wee chọta onye-isi-ikpe ahụ ka o nwụrụ-anwụ nʼoche-ikpe ahụ—A tụrụ ha mkpọrọ ma emesịa hapụ ha—Site na nkwalite nke mụọ Nifaị matara Siantọm dịka onye gburu ya—Ụfọdụ ndị nabatara Nifaị dịka onye-amụma. Ihe dịka nʼafọ 23 ruo 21 tutu amụọ Kraịst.
Onye-nwe wee nye Nifaị ike nrachị ahụ—E nyere ya ike ijikọta na itọpụ nʼelu ụwa na nʼelu-igwe—O nyere ndị ahụ iwu ichegharị ma-ọbụ laa nʼiyi—Mụọ ahụ wee buru ya site nʼigwe-mmadụ ruo nʼigwe-mmadụ. Ihe dịka nʼafọ 21 ruo 20 tutu amụọ Kraịst.
Nifaị wee mee ka Onye-nwe kwenye iji ụnwụ dochie agha ha—Ọtụtụ ndị wee nwụọ—Ha chegharịrị, ma Nifaị wee rịọsie Onye-nwe arịrịọ ike maka mmiri-ozuzo—Nifaị na Lihaị wee nata ọtụtụ mkpughe—Ndị ori Gadiantọn wee webatazie onwe ha nʼala ahụ. Ihe dịka nʼafọ 20 ruo 6 tutu amụọ Kraịst.
Ndị mmadụ akwụsịghị ike ma dị nzuzu ma na-eme ihe ọjọọ ngwa-ngwa—Onye-nwe na-ata ndị ya ahụhụ—Abụghị ihe nke ndị mmadụ ka atụnyeere ike nke Chineke—Nʼụbọchị ikpe, ndị mmadụ ga-erita uru ndụ mgbe nile na-adigide ma-ọbụ ọmụma-ikpe mgbe nile na-adigide. Ihe dịka nʼafọ 6 tutu amụọ Kraịst.
Samuel onye nke Leman wee buo amụma mbibi nke ndị Nifaị ma ọbụgbị na ha chegharịrị—Ha na akụ na ụba ha ka a bụrụ ọnụ—Ha jụrụ ma tụọ ndị-amụma nile ahụ okwute, ndị mụọ ọjọọ gbachibidoro ha gburu-gburu—Ma na-achọ an̄ụrị na-ime ajọọ-omume. Ihe dịka nʼafọ 6 tutu amụọ Kraịst.
Samuel wee buo-amụma ìhè nʼoge abalị na otu kpakpando ọhụrụ nʼoge ọmụmụ Kraịst—Kraịst wee gbapụta mmadụ site nʼọnwụ nke arụ na nke mụọ—Ihe iriba-ama nile nke ọnwụ ya tinyere ụbọchị atọ nke ọchịchịrị, nkewa nke nkume nile, na nnukwu nsogbu nile nke ụdị-okike. Ihe dịka nʼafọ 6 tutu amụọ Kraịst.
Onye-nwe tara ndị Nifaị ahụhụ n’ihi na ọ hụrụ ha nʼanya—ndị Leman agbanwere kwụsịrị ike ma nọsie ike nʼokwukwe ahụ—Onye-nwe ga-emere ndị Leman ebere nʼụbọchị ndị ikpe-azụ. Ihe dịka nʼafọ 6 tutu amụọ Kraịst.
Ndị Nifaị nile kwere nʼihe Samuel kwuru, Nifaị mere ha baptism—Agaghị enwe ike igbu Samuel site n’aku nile na okwute nile nke ndị Nifaị na-echegharịbeghị—Ụfọdụ ga-emesi obi ha ike, ma ndị ọzọ na-ahụ ndị mụọ-ozi.—Ndị ahụ na-ekweghị-ekwe na-asị na o kwesịghị-ekwesị ikwere na Kraịst na ọbịbịa ya na Jerusalem. Ihe dịka nʼafọ 6 ruo 1 tutu amụọ Kraịst.
3 Nifaị 1
Nifaị, nwa nwoke nke Hilaman, pụrụ site n’ala ahụ, ma nwa ya nwoke Nifaị wee debe akụkọ-ndekọta ahụ—Ọbụnadị na ihe iriba-ama nile na ihe-ebube nile ga-ejupụta, ndị ajọọ-omume tụrụ atụmatụ igbu ndị ezi-omume—Abalị nke ọmụmụ nke Kraịst wee bịaruo—E nyere ihe iriba-ama ahụ, ma kpakpando ọhụrụ wee pụta—Ikwu okwu ụgha nile na nghogbu nile wee bawanye, ma ndị ori Gadiantọn wee gbuo ọtụtụ. Ihe dịka site na afọ 1 ruo 4 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 2
Ajọ-omume na ihe arụ nile wee bawanye n’etiti ndị ahụ—Ndị Nifaị na ndị Leman wee dị n’otu ichekwa onwe ha megide ndị ori Gadiantọn—Ndị Leman a gbanwere ghọrọ ndị ọcha ma a kpọrọ ha ndị Nifaị. Ihe dịka site na afọ 5 ruo na 16 mgbe a musịrị Kraịst.
3 Nifaị 3
Gịdianhaị, onye-ndu ndị Gadiantọn, jiri ikike rịọ ka Lakoniọs na ndị Nifaị nyefee onwe ha na ala ha nile—Lakoniọs họpụtara Gịdgịdonaị dịka onye-isi ọchị-agha nke ndị-agha nile—Ndị Nifaị gbakọtara na Zarahemla na Uju ichekwa onwe ha. Ihe dịka afọ 16 ruo 18 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 4
Ndị-agha ndị Nifaị wee merie ndị-ori Gadiantọn—E gburu Gịdianhaị, ma onye nnọchị-anya ya, Zemnaraịha, akwugburu ya—Ndị Nifaị wee too Onye-nwe maka mmeri ha nile. Ihe dịka afọ 19 ruo 22 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 5
Ndị Nifaị wee chegharịa ma hapụ mmehie ha nile—Mọmọn wee dee akụkọ nke ndị ya ma kwupụtara ha okwu mgbe nile na-adigide ahụ—A ga-ekpọkọbata Israel site n’ogologo oge mgbasasị ya. Ihe dịka afọ 22 ruo 26 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 6
Ndị nke Nifaị wee mee nke-ọma—Mpako, akụ, na ịrọ-otu wee malite—E kewasịrị Nzukọ-nsọ ahụ site na nghọtahie—Setan duru ndị ahụ na nnupụ-isi pụtara ìhè—Ọtụtụ ndị-amụma kwusara nchegharị ma e gburu ha—Ndị gburu ha gbara izu ịweghara ọchịchị ahụ. Ihe dịka afọ 26 ruo 30 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 7
E gburu onye-isi-ikpe, e bibiri ọchịchị ahụ, ma ndị ahụ kewara n’agbụrụ n’agbụrụ—Jekọb, onye-otu mmegide Kraịst, ghọrọ eze nke ntụgwa nzuzo—Nifaị wee kwusaa nchegharị na okwukwe nʼime Kraịst—Ndị Mụọ-ozi wee kuziere ya kwa ụbọchị, ma ọ kpọlitere nwanne ya nwoke site na ndị nwụrụ-anwụ—Ọtụtụ wee chegharịa ma e mere ha baptism. Ihe dịka afọ 30 ruo 33 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 8
Oke-ikuku-mmiri nile, ala-ọma-jijiji nile, ọkụ nile, ifufe gburu gburu nile, mbibi nile a hụrụ-anya na-agba-ama mkpọgide-n’obe nke Kraịst—Ọtụtụ ndị ka e bibiri—Ọchịchịrị kpuchịrị ala ahụ mkpụrụ ụbọchị atọ—Ndị nke fọdụrụ sụrụ-ude ụwa-na-chi ha. Ihe dịka afọ 33 ruo 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 9
N’ime ọchịchịrị ahụ, olu nke Kraịst kwupụtara mbibi nke ọtụtụ mmadụ na ọtụtụ obodo-ukwu n’ihi ajọọ-omume ha—O kwupụtakwara ịdị-nsọ ya, maa ọkwa na iwu nke Moses e mejupụtawo ya, ma na-akpọkụ ndị mmadụ ka ha bịakwute ya ma ka a zọpụta ha. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 10
E nwere ịda jụụ n’ala ahụ n’ọtụtụ oge awa—Olu nke Kraịst kwere nkwa ịkpọkọta ndị ya dịka nnekwu ọkụkọ na-akpọkọta ụmụ ya—Akụkụ nke kara bụrụ ndị ezi-omume na ndị ahụ e chekwawo ha. Ihe dịka afọ 34 ruo 35 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 11
Nna Ahụ wee gbaa ama maka Ọkpara ya ọ hụrụ n’anya—Kraịst wee pụta ihe ma kwupụta aja mgbaghara mmehie ya—Ndị ahụ wee metụ apa nile nke mmerụ-arụ dị n’aka ya abụọ, ụkwụ ya abụọ, na akụkụ ya—Ha wee tie Hosana—O wee dozie usoro na ụdị nke baptism—Mụọ nke ndọrọ-ndọrọ bụ nke ekwensu—Ozizi nke Kraịst bụ na ndị mmadụ ga e kwere ma e mee ha baptism ma ha anata Mụọ Nsọ. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 12
Jisus wee kpọọ ma nye iri na abụọ ahụ ike—O wee kwuoro ndị Nifaị okwu yiri Okwu Chukwu ahụ e kwuru n’elu Ugwu—O wee kwuo Nkwupụta-Ịdị-Ngọzi nile—Nkuzi ya nile gafere ma buruzie iwu nke Moses ụzọ—E nyere ndị mmadụ iwu ka ha zuo oke ọbụna dịka ya na Nna ya zuru oke—Tulee Matiu 5. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 13
Jisus wee kụziere ndị Nifaị Ekpere nke Onye-nwe—Ha ga-akpado akụ nile n’elu-igwe—Iri na abụọ ahụ na ije-ozi ha e nyere ha iwu nsọ ka ha ghara ichegbu onwe ha maka ihe nile nke ụwa a—Tulee Matiu 6. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 14
Jisus wee nye iwu-nsọ nile: Ekpela ikpe; jụọ Chineke; kpachara-anya maka ndị-amụma ụgha—O wee kwe ndị ga-eme ọchịchọ nke Nna ya nkwa nzọpụta—Tulee Matiu 7. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 15
Jisus wee kwupụta na e mejupụtara iwu nke Moses na ya—Ndị nke Nifaị bụ atụrụ nke ọzọ ahụ nke o kwuru maka ya na Jerusalem—N’ihi ajọọ-omume, ndị nke Onye-nwe nọ na Jerusalem amataghị maka atụrụ nke Israel e kposasịrị. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 16
Jisus ga-eleta ndị ọzọ nke atụrụ ahụ furu efu nke Israel—N’ụbọchị ndị ikpe-azụ ozi-ọma ahụ ga-agaru ndị Jentaịlụ ma mgbe ahụ garuo ụlọ nke Israel—Ndị nke Onye-nwe ga-ahụ anya na anya mgbe ọ ga-eweta Zaịọn ọzọ. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 17
Jisus wee tụziere ndị ahụ aka ịtụgharị-uche n’okwu ya nile ma kpee ekpere maka nghọta—O wee gwọọ ndị ọrịa ha—O wee kpeere ndị ahụ ekpere, jiri asụsụ nke a na-enweghị ike ide ede—Ndị mụọ-ozi wee kwusaa ozi-ọma ma ọkụ wee gbachibido ụmụ-ntakịrị ha gburu-gburu. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 18
Jisus wee hiwe oriri-nsọ n’etiti ndị Nifaị—E nyere ha iwu ikpe ekpere oge nile n’aha ya—Ndị nke riri anụ-arụ ya ma n̄ụọ ọbara ya n’etozughị-oke a ga-ama ha ikpe—Ndị na-eso ụzọ ya e nyere ha ike inyefe Mụọ Nsọ. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 19
Ndị na-eso ụzọ iri na abụọ ahụ wee kwusaara ndị ahụ ozi-ọma ma kpee ekpere maka Mụọ Nsọ—E mere ndị na-eso ụzọ ya ahụ baptism ma ha anata Mụọ Nsọ na nkwusa-ozi nke ndị mụọ-ozi—Jisus wee kpee ekpere na-eji okwu nile nke a na-enweghị ike ide ede—Ọ gbara-ama maka nnukwu okwukwe karịrị-akarị nke ndị Nifaị. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 20
Jisus wee mee ka e nweta achịcha na mmanya n’ụzọ dị ebube ma ọzọ, nye ndị ahụ oriri-nsọ—Ndị nke Jekọb fọdụrụ ga-abịa na mmata nke Onye-nwe Chineke ha, ma ha ga eketa ala Amerika nile—Jisus bụ onye-amụma dịka Moses siri bụrụ, ma ndị nke Nifaị bụ ụmụ nke ndị-amụma—Ndị ọzọ bụ ndị nke Onye-nwe a ga-akpọkọta ha na Jerusalem. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 21
A ga-akpọkọta Israel mgbe Akwụkwọ nke Mọmọn pụtara—A ga-ehiwe ndị Jentaịlụ dịka ndị nwere onwe ha na Amerika—A ga-azọpụta ha ma ọbụrụ na ha e kwere ma rube-isi; ma ọbụghị otu ahụ, a ga-ebepụ ma bibie ha—Israel ga-ewu Jerusalem Ọhụrụ ahụ, ma agbụrụ nile ndị furu-efu ga-alaghachị. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 22
N’ụbọchị ndị ikpe-azụ, Zaịọn na mpaghara-ukwu ya nile, ka a ga-ehiwe, ma a ga-ekpokọbata Israel n’ebere na ịdị-nro—Ha ga-an̄ụrị ọn̄ụ—Tulee Aịsaịa 54. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 23
Jisus wee kwado okwu nile nke Aịsaịa—O wee nye ndị ahụ iwu ịchọsị ihe nile ndị-amụma dere ike—Okwu nile nke Samuel onye Leman gbasara Mbilite-n’onwu ahụ ka a gbakọnyere n’akụkọ-ndekọta ha nile. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 24
Onye-ozị nke Onye-nwe ga-edozi uzo maka Ọbịbịa nke Ugboro Abụọ—Kraịst ga-anọdụ n’ikpe—E nyere Israel iwu ịkwụ otu-uzo-n’uzo-iri nile na onyinye nile—A na-edebe akwụkwọ nke ncheta—Tulee Malakaị 3. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 25
N’Ọbịbịa nke Ugboro Abụọ, ndị mpako na ndị ajọọ-omume a ga-ere ha ọkụ dị ka ahihịa kpọrọ-nkụ—Elaịja ga-alaghachị tutu nnukwu na ụbọchị ahụ dị oke egwu—Tulee Malakaị 4. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 26
Jisus wee kọwadaruo ihe nile ala site na mmalite ruo n’ọgwụgwụ—Ụmụaka na ụmụ-ntakịrị wee kwupụta ihe ndị dị ịtụ-n’anya ndị a na-enweghị ike ide ede—Ndị nọ na Nzukọ-nsọ nke Kraịst na-enwekọrịta ihe nile onu n’etiti ha. Ihe dịka afọ 34 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 27
Jisus wee nye ha iwu ịkpọ Nzukọ-nsọ ahụ n’aha ya—Ị gbasa-ozi ya na ịchụ-aja mgbaghara-mmehie ya mejupụtara ozi-ọma ya—A na-enye ndị mmadụ iwu ka ha chegharịa ma e mee ha baptism ka e wee sachaa ha site na Mụọ Nsọ—Ha kwesịrị ịdị ọbụna otu Jisus dị. Ihe dịka site na afọ 34 ruo 35 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 28
Iteghete n’ime Iri na abụọ ahụ wee chọọ ma e kwere ha nkwa ihe nketa n’ime ala-eze Kraịst ma ha nwụọ—Ndị Nifaị Atọ ahụ wee chọọ ma e nyere ha ike imeri ọnwụ ka ha wee nọgide n’ụwa ruo mgbe Jisus ga-abịa ọzọ—E nwogharịrị ha ma hụ ihe nile na-akwadoghị n’iwu ikwupụta, ma ha na-akụzi ozi-ọma n’etiti ndị mmadụ. Ihe dịka site na afọ 34 ruo 35 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 29
Mpụta nke Akwụkwọ nke Mọmọn bụ ihe iriba-ama na Onye-nwe amalitewo ịkpọkọta Israel ma mejupụta ọgbụgba-ndụ ya nile—Ndị nke jụrụ mkpughe ụbọchị-ikpe-azụ ya nile na onyinye nile a ga-abụ ha ọnụ. Ihe dịka site na afọ 34 ruo 35 mgbe a mụsịrị Kraịst.
3 Nifaị 30
Ndị Jentaịlụ ụbọchị-ikpe-azụ e nyere ha iwu ka ha chegharịa, bịakwute Kraịst, ma ka a gụnye ha nʼụlọ nke Israel. Ihe dịka site na afọ 34 ruo 35 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Ndị Nifaị na ndị Leman a gbanwere ha nile nye Onye-nwe—Ha na-enwekọta ihe nile ọnụ, na-arụ ọrụ-ebube nile, ma na-eme nke ọma nʼala ahụ—Mgbe narị afọ abụọ gafeworo, nkewa nile, ihe ọjọọ nile, nzukọ-ụgha nile, na nsogbu nile malitere—Mgbe narị afọ atọ gafeworo, ma ndị Nifaị ma ndị Leman bụ ndị ajọọ-mmadụ—Amarọn wee zoo akụkọ-ndekọta nsọ ndị ahụ. Ihe dịka afọ 35 ruo 321 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Amarọn wee kụziere Mọmọn gbasara akụkọ-ndekọta nsọ ndị ahụ—agha wee malite nʼetiti ndị Nifaị na ndị Leman—Ndị Nifaị Atọ ahụ a kpọpụrụ ha—Ajọọ-omume, ekweghị-ekwe, mgba-asị, na amụsu wee were ọnọdụ. Ihe dịka afọ 321 ruo 326 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Mọmọn wee duo ndị-agha nke Nifaị—Ọbara na igbu-ọtụtụ-mmadụ wee zachaa ala ahụ—Ndị nke Nifaị wee kwaa akwa ma ruo uju jiri mwute nke ndị a mara ikpe—Ụbọchị amara ha agafewo—Mọmọn wee nweta epekele nile nke Nifaị—Agha nile wee gaa nʼiru. Ihe dịka afọ 327 ruo 350 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Mọmọn wee tie nchegharị nye ndị Nifaị—Ha wee rite nnukwu mmeri na otuto nʼike nke onwe ha—Mọmọn wee jụ idu ha, ma ekpere nile o kpere maka ha enweghị okwukwe—Akwụkwọ nke Mọmọn na-akpọ agbụrụ iri na abụọ nke Israel oku ikwere ozi-ọma ahụ. Ihe dịka afọ 360 ruo 362 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Agha na nnukwu igbu-mmadụ wee gaa nʼiru—Ndị ajọọ-omume wee taa ndị ajọọ-omume ahụhụ—Ajọọ-omume nke karịrị wee were ọnọdụ karịa otu o dịtụrụla mbụ nʼIsrael nile—Ndịnyom na ụmụ-ntakịrị a na-eji ha achụrụ arụsị aja—Ndị Leman wee malite ịzachapụ ndị Nifaị nʼiru ha. Ihe dịka afọ 363 ruo 375 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Mọmọn wee duo kwa ndị-agha Nifaị nʼagha nile nke ọbara na nnukwu igbu-mmadụ ọzọ—Akwụkwọ nke Mọmọn ga-apụta ime ka Israel nile kwenye na Jisus bụ Kraịst ahụ—Nʼihi ekweghị-ekwe ha, a ga-ekposasị ndị Leman, ma Mụọ ahụ ga-akwụsị ịnọnyere ha—Ha ga-anata ozi-ọma ahụ site nʼaka ndị Jentaịlụ nʼụbọchị ndị nke ikpe-azụ. Ihe dịka afọ 375 ruo 384 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Ndị Nifaị wee gbakọta nʼala nke Kumora maka ịlụ-agha ikpe-azụ—Mọmọn wee zoo akụkọ-ndekọta nile ahụ dị nsọ nʼugwu Kumora—Ndị Leman nwere mmeri, ma e bibiri mba Nifaị—Ọtụtụ narị nke ọtụtụ puku ka e jiri mma-agha gbuo. Ihe dịka afọ 385 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Mọmọn wee kpọọ ndị Leman nke ụbọchị ikpe-azụ oku ikwere na Kraịst, nabata ozi-ọma ya, ma ka azọpụta ha—Ndị nile kwere na Bible ga e kwere kwa na Akwụkwọ nke Mọmọn. Ihe dịka afọ 385 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Ndị Leman chọpụtara ma bibie ndị Nifaị—Akwụkwọ nke Mọmọn ga-apụta site nʼike nke Chineke—Ahụhụ nile ekwupụtakwasịrị ndị na-ekupụta ume iwe na esem-okwu megide ọrụ nke Onye-nwe—Akụkọ-ndekọta nke ndị Nifaị ga-apụta nʼụbọchị nke ajọọ-omume, ịdaghachi-azụ nʼagwa ọma, na ịgọnarị okwukwe. Ihe dịka afọ 400 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Moronaị wee kpọkuo ndị nke na-ekweghị na Kraịst ka ha chegharịa—O wee kwupụta Chineke nke ọrụ-ebube nile, onye-na-enye mkpughe nile ma na-awụpụtakwasị ndị okwukwe onyinye nile na ihe iriba-ama nile—Ọrụ-ebube nile na-akwụsị n’ihi ekweghị-ekwe—ihe iriba-ama na-eso ndị nke kwere ekwe—A na-agba ndị mmadụ ume inwe amamihe na idebe iwu-nsọ nile ahụ. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Moronaị wee dee na nke-nke ihe odide nile nke Ita—Akụkọ-agbụrụ Ita e depụtara ya—Asụsụ nke ndị Jared agwakọtaghị ya nʼụlọ-elu tọwa nke Babel—Onye-nwe kwere nkwa iduru ha nʼala nke a họọrọ ma mee ha nnukwu mba.
Ndị Jared wee kwado maka njem ịga ala e kwere na nkwa—Ọ bụ ala a họọrọ nʼelu nke ndị mmadụ ga ejere Kraịst ozi ma-ọbụ a zachapụ ha—Onye-nwe wee gwa nwanne-nwoke nke Jared okwu oge awa atọ—Ndị Jared wee wuo ụgbọ-mmiri—Onye-nwe wee gwa nwanne-nwoke nke Jared ka ọ tụpụta otu a ga esị tinye ìhè nʼụgbọ-mmiri ndị ahụ.
Nwanne-nwoke nke Jared wee hụ mkpịsị-aka nke Onye-nwe ka ọ na-emetụ okwute iri na isii aka—Kraịst wee gosị nwanne-nwoke nke Jared arụ mụọ ya—ndị nke nwere mmata ihe zuru-oke agaghị egbochi ha site nʼime akwa mgbochị ahụ—Ndị na-asụgharị asụsụ ka a kwadobere ha iwepụta akụkọ-ndekọta ndị Jared nʼìhè.
E nyere Moronaị iwu ịrachilite ihe odide nile nke nwanne-nwoke nke Jared—Agaghị ekpughe ha ruo mgbe ndị mmadụ nwere okwukwe ọbụna dịka nwanne-nwoke nke Jared—Kraịst wee nye ndị mmadụ iwu ikwere okwu ya nile na nke ndị na-eso-ụzọ ya—E nyere ndị mmadụ iwu ichegharị, ikwere ozi-ọma ahụ, ma a zọpụta ha.
Ndị aka-ebe atọ na ọrụ ahụ nʼonwe ya ga eguzoro dịka ịgba-ama nke ezi-okwu nke Akwụkwọ nke Mọmọn.
Ụgbọ-mmiri nile nke ndị Jared ikuku nile nyagara ha nʼala nke e kwere na nkwa—Ndị ahụ wee too Onye-nwe maka ịdị-mma ya—E mere Oraịha eze na-achị ha—Jared na nwanne ya nwoke wee nwụọ.
Oraịha wee chịa nʼezi-omume—Nʼetiti mpụrụ-ọchịchị na esem-okwu, ala-eze ndị na-azọ ọchịchị nke Shul na Koho e hiwere ha—Ndị-amụma wee maa ajọọ-omume na ife-arụsị nke ndị ahụ ikpe, ndị chegharịrị mgbe ahụ.
E nwere esem-okwu na ndọrọ-ndọrọ gbasara ala-eze ahụ—Ekịsh wee mee otu ntụgwa-nzuzo nile nke ịn̄ụ-iyi-jikọtara maka igbu eze ahụ—Ntụgwa nzuzo nile bụ nke ekwensu ma na-eweta mbibi nke mba nile—Ndị Jentaịlụ ọhụrụ a dọrọ ha aka na ntị megide ntụgwa nzuzo nke ga-achọ ịkwatu inwere-onwe nke ala nile, ebo nile, na mba nile.
Ala-eze ahụ wee na-agafee site nʼotu onye ruo nʼonye ọzọ site nʼagbụrụ, mgba-okpuru, na igbu-mmadụ—Ema hụrụ Ọkpara nke Ezi-omume—Ọtụtụ ndị-amụma kwusara nchegharị—Otu ụnwụ na agwọ ọtanye-nsi nile buteere ndị ahụ ajọọ-ahụhụ.
Otu onye-eze wee chịa mgbe nke ọzọ chichara—Ụfọdụ ndị eze ahụ bụ ndị ezi-omume; ndị ọzọ bụ ajọọ-mmadụ—Mgbe ezi-omume weere ọnọdụ, a na-agọzi ndị ahụ ma Onye-nwe na-eme ka ha mee nke-ọma.
Agha nile, nghọtahịe nile, na ajọọ-omume wee chịa ndụ ndị Jared—Ndị-amụma wee buo-amụma mbibi kpam-kpam nke ndị Jared ma ọbụghị na ha chegharịrị—Ndị ala ahụ jụrụ okwu nile nke ndị-amụma.
Onye-amụma Ita wee gbaa ndị ahụ ume ikwere na Chineke—Moronaị wee kọwagharia ọrụ-ebube nile na ihe-ịtụ-nʼanya nile e mere site nʼokwukwe—Okwukwe mere ka nwanne-nwoke nke Jared hụ Kraịst—Onye-nwe na-enye ndị mmadụ adịghị-ike ka ha wee dị umeala—Nwanne-nwoke nke Jared bupụrụ ugwu Zirịn site nʼokwukwe—Okwukwe, olile-anya, na afọ-ọma dị mkpa na nzọpụta—Moronaị hụrụ Jisus iru na iru.
Ita wee kwuo maka Jerusalem ọhụrụ a ga ewu na Amerika site na mkpụrụ-afọ nke Josef—O wee buo-amụma, a chụpụ ya, wee dee akụkọ ndị Jared, ma buo amụma mbibi nke ndị Jared—Ịlụ-agha wee biri ọkụ nʼala ahụ nile.
Ajọọ-omume nke ndị ahụ wee weta ọbụbụ-ọnụ nʼala ahụ—Koriantamọ wee gaa nʼịlụ-agha megide Gịlied, emesịa Lịb, ma emesịa Shịz—Ọbara na nnukwu-igbu-mmadụ wee jupụta ala ahụ.
E gburu ọtụtụ nde ndị Jared nʼịlụ-agha—Shịz na Koriantamọ wee kpọkọọ ndị ahụ nile nʼịlụ-ọgụ ọnwụ—Mụọ nke Onye-nwe kwụsịrị ịnọnyere ha—E bibiri ndị mba Jared kpam-kpam—Nanị Koriantamọ fọdụrụ.
Moronaị wee dee maka irite uru nke ndị Leman—Ndị Nifaị ndị nke na-ajụghị Kraịst e gburu ha. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Jisus nyere ndị na-eso-ụzọ iri na abụọ nke ndị Nifaị ike inyefe onyinye nke Mụọ Nsọ. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Ndị okenye wee chie ndị nchụ-aja na ndị nkuzi echichi site nʼibikwasị-aka nʼisi. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Otu ndị okenye na ndị nchụ-aja na-esi enye achịcha oriri-nsọ a kọwara ya. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Ụzọ nke ana-esi enye mmanya nke oriri-nsọ a kọwara ya. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Ndị nke chegharịrị a na-eme ha baptism ma mere ha enyi—Ndị nzukọ-nsọ nke chegharịrị a na-agbaghara ha—Nzukọ nile a na eduzi ya site nʼike nke Mụọ Nsọ. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
E nyere ọkpụkpọ-oku ịba nʼime ezumike nke Onye-nwe—Jiri ezigbo ebum-nʼobi kpee ekpere—Mụọ nke Kraịst na-enyere ndị mmadụ aka ịmata ihe-ọma site nʼihe ọjọọ—Setan na eduba ndị mmadụ nʼịgọnarị Kraịst ma na-eme ihe ọjọọ—Ndị-amụma nile na-egosipụta ọbịbịa nke Kraist—Site nʼokwukwe a na-arụ ọrụ-ebube nile ma ndị mụọ-ozi na akụzi ihe—Ndị mmadụ kwesịrị ile-anya ndụ ebighi-ebi ma rapara nʼafọ-ọma. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Ime ụmụ-ntakịrị baptism bụ ihe arụ ọjọọ—Ụmụntakịrị dị ndụ nʼime Kraịst nʼihi Aja mgbaghara mmehie ahụ—Okwukwe, nchegharị, ịdị-nwayọ na ịwedata obi ala, ịnata Mụọ Nsọ ahụ, na idigide ruo ọgwụgwụ na-eduba na nzọpụta. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Ma ndị Nifaị ma ndị Leman e metọrọ ha ma si nʼomume-kwesịrị-ekwesị wezuga onwe ha—Ha na-ata ahụhụ ma na-egburịta onwe ha—Mọmọn wee kpee ekpere ka amara na ịdị-mma wee nọkwasị Moronaị ruo mgbe nile. Ihe dịka afọ 401 ruo 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.
Igba-ama maka Ạkwụkwọ nke Mọmọn na-abịa site nʼike nke Mụọ Nsọ—Onyinye nile nke Mụọ a na-enye ha ndị nwere okwukwe—Onyinye nke mụọ nile nʼeso okwukwe oge nile—Okwu nile nke Moronaị wee kwuo okwu site nʼuzuzu—Bịakwute Kraịst, ka e mee ka unu zuo-oke nʼime ya, ma sachaa mkpụrụ-obi unu nile. Ihe dịka afọ 421 mgbe a mụsịrị Kraịst.